တောသားမြို့ေ၇ာက် မောင်မောင်ကြီး – Grab Love Story
by admin August 7, 2021 August 7, 2021
“ မင်္ဂလာပါ ” ခင်ဗျာ . ကျွန်တော် လေသန့် လေးစားစွာ တင်ပြရေးသားလုိက်ပါတယ်. …
ဘကြီးထောင်ရဲ့ချစ်ဒုက္ခ ဇာတ်လမ်းအပေါ် မှီငြမ်းရေးသားချင်း ဖြစ်သောကြောင့် ကိုတပ်ကြပ်ကြီးအားအကြောင်းကြား၊ အကူအညီတောင်း၊ အကြံဉာဏ်တောင်းကာ ရေးသားချင်းဖြစ်ပါသည်။
ဘကြီးထောင်နှင့် တူကြီးတော်သူ မောင်မောင်ကြီးအဖြစ် ဇာတ်ကောင်ဖန်တီး ထားမျှသာ ဖြစ်ပါတယ်။
မှုလ ဇာတ်လမ်းအပေါ် မှားရွင်းစေလိုခြင်း၊အနှောက်အယှက်ပေးလိုခြင်း လုံးဝမရှိကြောင်း လေးစားစွာဖြင့်တင်ပြအပ်ပါတယ်။
“ မောင်မောင်ကြီး ( တောသား ) ”
ကျွန်တော်က မောင်မောင်ကြီးပါ။ တောသားကြီးပေါ့ဗျာ ။ တောသားဆိုတော့ အတီးအတပေါ့ ။
တစ်နေ့ ရွာမှာ အမျိုးတွေနဲ့ စကားပြောရင်း …. မြို့ က ဘကြီးတစ်ယောက်ကို သတိရသွားတယ်။ ကျနော့် အမေရဲ့ အကို အကြီးဆုံး ၊ လူပျိုပေါက်ထဲက မြို့ပေါ်မှာ အဖိုးလေးတို့က ခေါ်ထားပြိး ကျောင်းထား လို့ မြို့မှာဘဲ ကြီး၊ အိမ်ထောင်ကျ၊လို့ ရွာကို သိပ်ပြန်မရောက်တော့ပါဘူး၊ သူ့ကလေးတွေငယ်တုန်းကတော့ တနှစ်တခေါက် နွေရာသီကျောင်းပိတ်ရက်တိုင်း ကျနော်တို့ အဖိုးအဖွားအိမ် ပြန်လာပို့ထားလို့ ကျနော်တို့လို အမျိုးအုပ်ကြီးတဲ့ လူတွေအဖို့ မောင်နှမ ဝမ်းကွဲတွေ ဆယ့်လေး ငါးယောက်လောက် ဆော့ကြတာ ပျော်စရာကြီးပေါ့ …. ၊
ဘကြီးထောင်ရဲ့ သမီး အကြီးဆုံး ၊ ထွေးရီက ကျနော့်ထက်၂နူစ်လောက်ကြီးတယ်၊ ကျနော့်အမနဲ့ မှရွယ်တူလေ၊ အခု အရွယ်တွေရောက်လာကြတော့ သူတို့လည်း ၂နစ် ၃ နစ်လောက်မှ တခေါက်ရောက်ကြတော့တယ်၊ ကိုကြီးတူးဆို သင်္ဘောသားဆိုတော့ ဘယ်လာဖြစ်တော့မလဲဗျာ၊
ကျွန်တော်က လူပျိုကြီးပါ။ တော်တော်တော့မကြီးသေးပါဘူး … ၃၀ ကျော်ပေါ့ ။ တောသားဆိုတော့ ကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်းတော့ နေတတ်တယ် ။ ရွာမှာက အပျိုတွေပေါပါတယ် … ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်က စိတ်မဝင်စားဘူး ။ မိုးလင်းမိုးချုပ် အလုပ်ပဲ သိတာ …. တနေ့တနေ့ လယ်ထဲဆင်းလိုက်၊အိမ်ပြန်လိုက်ပေါ့။ တလတခါတော့ မြို့တက်ဖြစ်ပါတယ် …ကုန်ပို့ရင်းပေါ့ ။ မြို့မှာတော့ ကျွန်တော် စိတ်ဝင်စားတဲ့ သူလေးတော့ရှိပါတယ်…………ဟဲဟဲ … 😉
အော် ဒါနဲ့ ဒီတစ်ခေါက်တော့မြို့တက်ရင် ကောင်မလေးကို သွားချောင်းမယ်လေ………… စိတ်ဝင်စားသာ စားတာပါဗျာ .. သူနဲ့ တွေ့ရဘို့က တော်တော်မလွယ်ပါဘူး ။ ကျွန်တော်က တောမှာပျော်တဲ့ အကောင် သူက မြို့သူ ။ အော် ဘဝ ဘဝ ….. ဒါပေမဲ့ အကြံတခုတော့ရှိတယ်….တော်တော့်ကို ကြံထားတာ… ဒါကတော့………….
မောင်မောင်ကြီး တစ်ယောက် ကောင်မလေးနဲ့ နီးစပ်ဖို့ …. အကြံရှာရင်း … ရှာရင်းနဲ့ နောက်ဆုံးတော့ မြို့မှာနေတဲ့ ဘကြီးဆီ သွားပီး ခွင်ရှာကြည့်ဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်လေ ဒါနဲ့ပဲ ဒီတစ်ခေါက် မြို့တက်ရင် ဘကြီးဆီသွားဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ် … ဘကြီးကိုလွမ်းလို့တော့မဟုတ်ပါဘူး ဟီးဟီး အကူအညီလေးပေ့ါ ရလိုရညား ………………..
အော်ဒီနှစ် စပါးအထွက်ကလည်း ကောင်းလိုက်တာ …. တော်တော်လေးကို မြတ်မှာ … စဉ်းစားရင်းပီတိလေးနဲ့ပေါ့ ။ ငါမြို့တတ်ပြီး စပါးရောင်းရင်း ဘကြီးအိမ်မှာ ခဏနေရမယ်……….ဒီလိုနဲ့ စပါးတွေစု ၊ ကားတွေပေါ်တင်… တောကနေမြို့တတ်ဖို့ …တလောလောနဲ့ပေါ့ ၊
“ကားပေါ်တင်ရတာလည်းကြာလိုက်တာနော်” ….. ကဲ .. ပြီးပြီ … တောမှာက မိဘတွေကရှိသေးတယ်လေ .. ဒီတော့ … မြို့မှာကြာနေရင် စိတ်ပူမှာ .. သေခြာလေးတော့ ပြောခဲ့ရမယ်.. ဘကြီးထောင်အိမ်မှာ ခဏနေမယ်လို့ပေ့ါ။
ကဲ တနေ့တလှံ မြို့ဘယ်ရောက်မလဲ ဟဲဟဲ ….
ရောင်းစရာရှိတာလေးတွေရောင်း ပိုက်ဆံလေး အိတ်ထဲထည့် … ပြီးတော့ ဘကြီးရှာပုံတော် ဖွင့်ပီဗျို့ …..
ဘကြီးထောင်က တော်တော်ဆိုးတယ်ဗျာ …. ဘယ်အိမ်မှာနေမှန်းလည်းမသိ ..ဘယ်ရောက်နေမှန်းမသိ … ရှာရတာ တော်တော်ခက်တယ်ဗျာ ….
ဘကြီးက .. သူ့မိန်းမ ကြီးကြီးဆုံးပြီးအတည်းက …. သူ့ သားသမီးတွေနဲ့ပဲ နေတော့တာ …
အော်.. တစ်အိမ်တက်ဆင်း တော့ ရှာရမယ်လေ………………… ကိုယ့်အကျိုးအတွက် ဘကြီးကိုအသုံးချရမှာပေါ့ ဟီးဟီး
ကောင်မလေးရှာဖို့ အကူအညီပါဗျာ………….. ရမယ်ထင်ပါတယ်………
အင်း ဒီနေ့တော့ ညနေကရောက်နေပြန် …..ဘကြီးက သူ့ဘယ်သားသမီးအိမ်းရောက်မှန်းမသိ … ဟူး………………………… မလွယ်လိုက်တာနော် .. ။
အစ်မအိမ်မှာဖြစ်မှာပဲ နေမှာ………..စဉ်းစားရင်း အစ်မအိမ်ရှိရာ ………. သွားနေပီ…………
“ အစ်မရေ အစ်မ … အစ်မ ရှိလားဗျို့ ……..”
ဟာအစ်မကလည်း ဘယ်ရောက်နေလည်းမသိဘူး ….ဟူး …မောရတဲ့ထဲ .. ဒီအစ်မကလည်း
ကျွန်တော် မောမောနဲ့ အိမ်ရှေ့မှာ မတ်တတ်ရပ်လေး အော်ခေါ်နေလိုက်တယ် ။
တော်တော်ကြာသည်အထိ ပြန်ထူးသံ မကြားမိပါ…………… ဟာဒုက္ခပါဘဲ .. ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ…
ညနေစောင်းနေတာတောင် အစ်မက ပြန်မလာသေးဘူး ……………… ဟူး………
“ အစ်မရေ အစ်မ ” “ အစ်မရေ ”
ကျွန်တော့အသံ တော်တော် ကျယ်သွားသည် ၊ အဲ ……….. ပြန်ထူးသံ ကြားလိုက်ရတယ်…
ဒါပေမယ့် အစ်မ မဟုတ် ၊ ကောင်မလေး တစ်ယောက် .. ပြန်ထူးလိုက်တာ ဖြစ်နေသည် ။
တစ်ခါမှ မမြင်ဖူး သော ကြောင့် နည်းနည်း ဆန်းနေသည်။
“ ဟေး ညီမလေး အစ်မ ထွေးရီ ရှိလား … ”
ပြန်ဖြေသော အသံလေး က … နာဝင်ချိုလှသည် …. …
ခဏနေ ပြန်လာမည်ဟု ပြောကာ အိမ်ထဲ ဝင်ဖို့ ပြောလာသည်၊
“ အကို က ဘယ်သူလည်း ”
အော် ကိုယ့်ကို ကို မိတ်ဆက်ရင်း ….. စကားပြောရင်း အစ်မကို စောင့်နေလိုက်သည်။
အတော်ကြာ ကြာသွားသည် … တော်တော်လည်းခင်လာပီ ။ ဘကြီး မိန်းမ အမျိုး မှန်း သိတော့ သတိတော့ထားပီး ပြောနေလိုက်တယ်..
ဒီကောင်မလေးတောင် အပျိုကြီး ဖြစ်နေပြီ ၊ ဟု ကိုယ့်ဟာကို ပြောနေမိတယ်….
၁ နာရီလောက်ကြာသောအခါ အစ်မ အပြင်မှ ပြန်လာတာ တွေ့လိုက်ရတယ်…..
အစ်မက မတွေ့တာ ကြာတဲ့ ကျွန်တော်နဲ့ တွေ့တွေ့ချင်း ဝမ်းသာအားရ စကားတွေ ပြောနေကြတာပေ့ါ
ဘကြီးအကြောင်းတောင် မေးဖို့ မေ့နေတယ်…………….
ခဏနေမှ အစ်မက ဘကြီးမရှိကြောင်း သူ့ သားတွေအိမ်မှာ သွားနေတတ်ကြောင်း ၊ တလှည့်စီ လိုက်နေကြောင်း … စုံနေသည်။
အစ်မက… မှောင်နေပီ ဖြစ်လို့ အ်ိမ်မှာနေဖို့ပြောတယ်……… အင်းလေ .. မနက်ကြမှ ဘကြီးဆီ သွားတော့မယ်၊
ဘကြီးရှိရာ ညီတော်မောင့် အိမ်ကို ဖုန်းဆက်ပီး စကားပြောဖြစ်ကြသည်။
စကားမစပ် အစ်မနဲ့ လည်းမတွေ့တာ ကြာပီလေ။ အစ်မက ကျောင်းတဖက် …
စကားပြောရင်း အစ်မရဲ့ တူမလေးကို ခိုးခိုး ကြည့်နေမိသည်။ အော် မသင့်တော်ပါဘူးလေ ၊( စ်ိတ်အထင်)
ဟာ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အားရ အောင်တော့ ကြည့်ရမှာပဲ ………………
တီဘီကြည့်ရင်း ထမင်းစားဖြစ်ကြတယ်…. အစ်မ … ဒီနေ့တော့ ကျွန်တော်ပျော်တယ်ဗျာ ….လို့ ပြောနေမိတယ်………..
ည…. တော်တော်နောက်ကြမှ ရေ ချိုးဖို့ သတိရတော့တယ်……….
“အစ်မရေ ရေချိုးခန်းက ဘယ်မှာလည်း ….. ”
အစ်မ ညွန်ပြရာ လိုက်ရှာနေမိတယ်….. ရေချိုးခန်း နဲ့ကပ်ရက်က ….. စန္ဒာနဲ့ အစ်မရဲ့ အဝတ်လှန်းတဲ့ အခန်း….
ပထမ … မှားပီး အဝတ်လှန်းခန်းထဲ ဝင်သွားမိတယ်…. … မျက်လုံးတောင် တော်တော်ပြူးသွားတယ်…
ဘရာဇီယာလေးတွေ အစီအရီပေါ့ .. ဒါနဲ့ … မြန်မြန်ကြည့်ပီး …. ပြန်ထွက်လာလိုက်တယ်…
ဘေးခန်းကတော့ ရေချိုးခန်းသေချာလောက်ရဲ့ပေါ့ ……
ဒါနဲ့ အခန်းဝရောက်တော့ ….တံခါးက .. စေ့ထားတာ တွေ့တော့ တွန်းအဖွင့် စန္ဒာကအထွက် …
လက်က ချော်ပီး မျက်နှာကို ထိမိသွားတယ် ….
“ ညီမလေး နာသွားလား…………….”
မေးရင်း တစ်ကိုယ်လုံး အမြန်ကြည့်လိုက်မိတယ်
ဖြစ်ပုံက …. စန္ဒာက ရေချိုးခန်းက အ်ိမ်သာသွားပီး အထွက် … ထမိန်လေးမလို့ ..
ပြီးတော့ မြန်မြန်လေး ရေချိုးခန်းထဲ ဝင်လိုက်ပီး ရေချိုးနေလိုက်တယ်…. အော်…. ညီလေးက…
တဆတ်ဆတ်တောင် ဖြစ်နေတယ်…. ….. ဘယာဇီယာတွေ တွေ့လိုက် …ကောင်မလေး ခြေသလုံးကို တွေ့လုိက် ဆိုတော့ …………… ဒီလောက်တော့ ဖြစ်မှာပေါ့လေ…
ကိုယ်ဟာကို တွေးရင်း …. ရေချိုးအပြီး ………. အစ်မပြတဲ့ အခန်းထဲ ဝင်…. အဝတ်လဲ …
ပီးတော့ ပင်ပန်းသမျှ ….အတိုးယူပီး အ်ိပ်ဖို့ လုပ်နေလိုက်တယ်…………………
အော် ရင်ထဲမှာတော့ ……………… မြို့က စိတ်ဝင်စားတဲ့ … ချောချော …ကို တမ်းတရင်း….ဝမ်းသာနေမိတယ်….
ပီးတော့ … အိပ်လို့ကလည်းမရ ….. လူးလိမ့်ရင်း………………….. အစ်မတူမ … စန္ဒာလေးကိုလည်းမြင်ယောင်နေမိပြန်တယ်………..
ဒါနဲ့ ………….. စကားပြောသံ သဲ့သဲ့ ကြားလိုက်ရတယ်…. အစ်မက ..သူ့တူမကို ဆူနေတာ…အိပ်ခံနီးပေ့ါ
မကြာလိုက်ပါဘူး …….. အသံတွေ ပျောက်သွားတယ်……… ဒါနဲ့ အခန်းထဲက မီးကို ပိတ်ပီး အိပ်ယာထဲ အဝင် … မျက်လုံးထဲ မီးရောင်လေး တစ်ခု ဝင်လာတယ်…
အစ်မက ဘေးခန်းလေ……. အစ်မအခန်းက မီးရောင်လေး……….နံရံကအပေါက်လေးထဲက ဖြတ်လာတာ…
ဒါနဲ့ပဲ ….. စိတ်ဝင်စားလာရော. ၊ ချောင်းကြည့်ရင် ကောင်းမလားပေါ့ …
အပေါက်လေးက … သေးပေမယ့် သေခြာချောင်းကြည့်တော့ ကြည့်လို့ ရနေတယ်…………………………….
ဒါနဲ့ပဲ ကြည့်လိုက်တယ်…. သေသေခြာခြာတော့………မမြင်ရဘူး အစ်မက… ကုတင်ပေါ်မှာ ..လှဲနေပီ
စန္ဒာက ကုတင်ဘေးမှာ ….အဆူခံထားရတော့ … မျက်နှာ သိပ်မကောင်းဘူး…. အဝတ်တွေခေါက်နေတာတွေ့လိုက်ရတယ်……….. ကောင်မလေးက ညဝတ်ဘလောက်လေးဝတ်လို့…
အဝတ်လေးကို သပ်သပ်ရပ်ရပ်လေးခေါက်နေလိုက်တာ…………. ချစ်စရာလေး…..
ဒါနဲ့ အဝတ်ခေါက်တာကို ကြာကြာလေး စောင့်နေလိုက်တယ်………………………..
မကြာခင်ပဲ …. စန္ဒာတစ်ယောက် …မတ်တပ်လေးရပ်ပီး….. ဘောင်းဘီဝတ်နေတာ တွေ့ရတယ်…..
ဒီကောင်မလေး အိပ်ခံနည်း ဘာလို့ ဝတ်တာလဲ ပေါ့ … စိတ်ဝင်းစားရင်း မျက်လုံးပြူးလာရော……
ကောင်မလေးက….ထမီအကိုအလွတ်ချွတ်လိုက်ပီး …. ညဝတ်ဘောင်းဘီရှည်ကိုလဲပီး …အိပ်တတ်တာ..ကိုး
အားပါးပါး…လှလိုက်တဲ့ ပေါင်တံလေး……………………. မျက်စီထဲ စွဲနေမိတယ်…
၀ိုးတဝါး မီးရောင်အောက်မှာ တွေ့လိုက်ရသော ကောင်မလေးရဲ့ ပေါင်တံသွယ်သွယ်လေးကို မြင်ယောင်ရင်း
ဖွားဖက်တော် ညီလေးက … တဆတ်ဆတ် ပြန်ဖြစ်တာပြန်ပီ။
အိပ်မရ … လူးလွန့်နေရင်း စိတ်ထဲမှာ …………… မုန်တိုင်းထန်နေမိတော့ …. တစ်ခုခုလုပ်ရန် ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်…
“ အင်း ကောင်မလေးကို မှန်းပီး …. တခါလောက်တော့…..ထုလိုက်မှ အိပ်လို့ရတော့မယ်………..”
ဒါနဲ့ပဲ … အခန်းတံခါးကို ဖြေးဖြေးဖွင့်ပီး …. အဝတ်လှန်းခန်းသို့ ….. လျှောက်လာမိတယ်….
အခန်းထဲ ….ခိုးကြောင်ခိုးကြောင်လေးပေါ့ … ဝင်ခဲ့တယ်…
ပီးတော့ …. ကောင်မလေး .. အတွင်းပစ္စည်း များ ကို… သေခြာရှာ တာပေါ့……………..
ရောနေတာ ဗျာ တော်တော်ရှာ လိုက်ရတယ်… ကိုယ့်အမ ဟာ ဖြစ်မှာစိုးလို့…..
ကဲ တွေ့ပီဗျာ …..လှလိုက်တဲ့ …. ဘယာလေး ရယ် ပန်နီ ပန်းရောင်လေးရယ်
အော် ဒါမျိုးက … ကျွန်တော့်လို လူပျိုကြီးမျိုး လက်ထဲရောက်ဖို့ ခက်တာကို…. ယုယုယယလေး လက်မှာကိုင်
လူတွေ့မှာ စိုးလို့ မြန်မြန်လေး ရေချိုးခန်းထဲ ပြေးဝင် ……………. တံခါး အသာလေးပိတ်
အို ပီးတာနဲ့ အားရပါးရ နမ်းတာဗျာ …………………… ညီလေးက သံချောင်းအလားပေါ့
ပန်းရောင်ပန်တီ လေးကို နမ်းလိုက် ………. ထုလိုက်ပေါ့…. ပီးချင်စိတ်ပေါက်လာတိုင်း နမျောလွန်းလို့ …. စိတ်ထိန်းလိုက် ထုလိုက်နဲ့ တော်တော်လေးကြာသွားတယ်………….. နောက်ဆုံးတော့……………. အားရပါးရ …နံရံတွေဆီ … လွှတ်ထုတ်လိုက်တယ်လေ။
“အား …. စိ်တ်မှန်းနဲ့တောင် ဒီလောက် ဖြစ်နေရင် … အပြင်ဆိုရင်တော့ ……………….. မိုးလင်းပဲ”
စိတ်မှာ ရေရွတ်ရင်း … အိပ်ခန်းကို ပြန်ရန်…. တံခါး အဖွင့်
တံခါးအဖွင့် ………. တွေ့လိုက်ရသော မြင်ခွင်းက … ကျွန်တော်ကို… တုန်ရီသွားစေပါတယ်…
“ ဟာ အကိုကြီး မအိပ်သေးဘူးလား………………. ” အံအားသင့်သွားသော မီးကောင်ပေါက်မလေး စန္ဒာ ရဲ့ စကားသံကို..
ကျွန်တော်မှာလည်း လက်ထဲက … ကောင်မလေး အတွင်းပစ္စည်းလေးတွေ …. တွေ့လိုက်ရတဲ့ကောင်မလေးက… စိတ်ထဲက…. နတ်မိမယ်လေး…
“ ဟာ ညီမလေး ….” အာမေဒိတ်အသံနဲ့ အတူ……………… လက်ထဲကဟာလေးတွေကို… လွတ်ချရမလို…. ဖွတ်ထားရမလို လုပ်နေတုန်း… ကောင်မလေးက ………………. မြင်သွားတယ်….
“ အကိုကြီး ညီမလေး ဟားလေးတွေလား…. ဘာလို့လက်ထဲမှာ ကိုင်ထားတာလည်း….. ”
“ ငရဲ ကြီးလိမ့်မယ်….. ကိုကြီး .. ၊ ပြန်ပေးပါနော်….”
စန္ဒာရဲ့ စကားသံအဆုံး ..
ကျွန်တော် ဘာလုပ်ရမှန်းမသိ …. ကြက်သေ သေနေမိပါတယ်…
ဒါနဲ့ ရှက်ရှက်လေး လုပ်ပီး အားတင်းကာ…………….
“ မဟုတ်ဘူး ညီမလေး .. ဒါက ရေချိုးခန်းထဲမှာ တွေ့လို့ ရေစိုမှာ စိုးလို့ အကို ယူလာတာပါ … ”
“ ရော.. ညီမလေးဟာ ဆို သိမ်းလိုက်နော်… ”
ကဗျာ ကရာ ပေးပီး … ကျွန်တော့် အ်ိပ်ခန်းရှိရာ ..သို့ သွက်သွက်လေး လျှောက်လာလိုက်တယ်..
စိတ်ထဲမှာတော့ ………… တုန်ရီနေတယ်…. လူပျိုကြီး …. ရင် ခုန်နေတယ်ပေါ့ဗျာ…..
စန္ဒာမှာတော့ နားမလည်တဲ့ မျက်လုံးလေးနဲ့ ကျန်ခဲ့တယ်…..
အခန်းထဲ အရောက်……………………….. မြန်မြန်လေး အိပ်ယာပေါ်တက် ပီး အိပ်လိုက်တာ………… ဘာကိုမှမသိတော့ပါဘူး…………………. အား…………………………စန္ဒာရယ်…. အတူတူသာအိပ်လိုက်ရရင်တော့..
ကျွန်တော်ဘာမှန်းမသိပေမယ့်…. မနက်နိုးနိုးချင်း သိလိုက်တာက…………. အခန်းတံခါး … ညက ..မပိတ်ဖြစ်ခဲ့လို့
ပွင့်နေတာ .. မြင်လိုက်ရတယ်လေ ၊
ပိုဆိုးတာက ..ကျွန်တော်က အိပ်ရင် .. ညီလေးကို ကိုင်ပီး အိပ်နေကြ ………… ပုဆိုး ဆိုတာ … မမြဲ …ပေါ်လှန်နေတာ..
“ သွားပါပီ မနက်က …. အစ်မနဲ့ ကောင်မလေး .. တွေ့သွားရင်ဖြင့်…..” တိုးတိုးလေး ရေရွတ်ရင်း …. မျက်နှာသစ်ဖို့
အစ်မကတော့ ကျောင်းသွားခံနီး … ပြင်ဆင်နေပါတယ်…..
“ မောင်လေး ညက အဆင်ပြေလား ”
ကျွန်တော်… မြန်မြန်ပဲ ခေါင်းညိတ့်ကာ…………..ရေချိုးခန်းထဲ ဝင်ပီး ရေချိုးရင်း… ညက အဖြစ်အပျက်များကို မြင်ယောင်နေပါတော့တယ်…..
ရေချိုးအပီး …. အစ်မနဲ့ စကားပြောရင်း စန္ဒာ ကြော်ထားသော ထမင်းကြော်လေးစားရင်း ..ကောင်မလေးကို ခိုးခိုးရှာနေမိပါတယ်.
ကောင်မလေးက တက္ကသိုလ်ကျောင်းသူလေး .. အပျိုနုနုထွတ်ထွတ်လေး ……..အင်း….
ငါက…. လူပျိုကြီး……….ကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်း တောသား ……….မလွယ်ပါဘူးလေ… ရှိပါစေတော့
“ ငါ့မောင် .. အစ်မက ကျောင်းသွားရမှာ ……. မင်းဘကြီးက … မောင်သင်းအ်ိမ်မှာ …ဒါပေမယ့် မောင်သင်းကဆေးရုံတင်ထားရတယ် အူအတက်ပေါက်လို့ ၊ အစ်မတော် ညနေကျမှ ဆေးရုံလာမှာ ၊ မောင်လေးအရင်သွားနှင့်နော် ”
အစ်မက သူနဲ့အတူတူ … အိမ်မှထွက်စေချင်ပုံရတယ် ….
ကျွန်တော်က တော့ … စန္ဒာလေးကို အီစီကလီ လုပ်ချင်သေးတယ်လေ….
ဒါပေမယ့်…………… ဘဝက…. ဒီလိုကို ။
“ ဟုတ်ကဲ့အစ်မ .. ကျွန်တော်လည်း မောင်သင်းအိမ်သွားတော့မယ်….”
“ ဒါပေမယ့် … ဘယ်လိုသွားရမှန်းမသိ ဘူး အစ်မ .. လမ်းညွန်ပါအုန်း ”
ဒါနဲ့ အစ်မ အစီအစဉ်လေးလုပ်ပေးလိုက်ပါတယ်………….. ကောင်းလိုက်တဲ့ လမ်းညွန်လေးဗျာ…
“ ဒါဆို … မောင်ကြီးရေ.. မင်းတူမ… စန္ဒာလေးကို လမ်းပြခိုင်းလိုက်နော် ..သူသိတယ် ..”
ပြောပြောဆိုဆို .. ကောင်မလေးက… ဖီးလိမ်းလို့ ကျောင်းသွားဖို့ ပြင်နေတယ်…..
အစ်မကတော့ ……….. ကျေးဇူးကြီးပါတယ်လေ… စိတ်မှာရေရွတ်ရင်း ( ဂွင်ပဲလို့) ….ကောင်မလေးကို… ကြည့်နေမိတယ်.
ညက … လူမိပြီး ရှက်နေသော ကျွန်တော် ဘယ်လို စကားစရမှန်းမသိ .. ကောင်မလေးကို….ကြည့်နေတုန်း
“ အကိုကြီး .လာ သွားကြမယ် .. ညီမလေးက.. ကိုသင်းအိမ်နားကို သွားမှာ .. ကျောင်းက .. နီးနီးလေး…”
ကောင်မလေးရဲ့ စကားသံ အဆုံးမှာ … ကျွန်တော် ထိုင်ခုံက မတ်တတ်ရပ်ပီးသား ဖြစ်နေပါတယ်။
အစ်မအိမ်ကနေ အတူတူ လမ်းလျှောက်နေတုန်း … ကောင်မလေးက… ရှက်နေသော ကျွန်တော့်ကို… စကားလာပြောပါတယ်…
“ ကိုကြီး ညက…. အိပ်တာ … တံခါးကြီး ဖွင့်နေတယ်နော် ….သိလား ”
“ အမ် .. ဘာ ဖြစ်လို့လဲ .. ညီမလေး … ၊ ညီမလေး အခန်းထဲ လာသွားလို့လား ”
ကျွန်တော် … တုန်တုန်ရီရီလေး မေးလိုက်ပါတယ် ။
“ ဟုတ်တယ်လေ ကိုကြီးရ .. ညီမလေး စာအုပ်တွေ .. က .. အဲဒီအခန်းထဲမှာ ထားတာ… ဒါလာယူတာ”
ဟာ သွားပါပီ …. ကိုယ့်ကိုကို … ရေရွတ်ရင်း……………. စိတ်ထဲ … တမျိုးဖြစ်လာပါတယ်.
အတန်ကြာ လမ်းလျှောက်နေတုန်း …
“ညီမလေး… ကိုကြီးနောက်နေ့ အစ်မအိမ် ပြန်လာပီး ညီမလေးကို လာတွေ့မယ်နော် ”
ဘာမဆိုင် ညာမဆိုင် စကားတွေပြောရင်း လမ်းလွဲလိုက်တယ်..
မီးကောင်ပေါက်မလေး စန္ဒာကတော့ … ညက အဖြစ်အပျက်များကို မြင်ယောင်ရင်း…
သူ့ကို စိတ်ဝင်စားနေသော ကျွန်တော့ကို .. ပြုံးပြုံးလေး ကြည့်နေပါတယ်..
စိတ်ထဲမှာတော့ … ညက … မြင်ခွင်းကို…မြင်ယောင်ရင်းပေါ့…
အခန်းတံခါးက ပွင့်နေတော့………… မနက်မနိုးခင် ..အခန်းထဲ အဝင် ကုတင်ပေါ်အိပ်နေတဲ့
ကျွန်တော့ ပုဆိုးက ဘိုက်ပေါ်ရောက် . … ညီလေးက အရိန်ကမသေ..လန်းဆန်းလို့… မိုးပေါ်ထောင်နေချိန်
မွေးရာပါညီလေးကို ကောင်မလေးက အားရပါရကို … မြင်ခဲ့ရတာကိုး….။
“ ညီမလေး စန္ဒာ နီးပီလား … မောင်သင်းတိုက်ခန်းနဲ့ ”
ကျွန်တော်က မေးခွန်းလေးလုပ်ပီး ကောင်မလေးကို စကားစလိုက်ပါတယ်…. ၊
အတွေးနဲ့လမ်းလျှောက်နေတဲ့ စန္ဒာ ဟာ … လန့်သွားပီး … ပြန်လှည့်ကြည့်ပါတယ်…
“ အော် အစ်ကို နီးပါပီ …. ရှေ့နားတင်နော် ”
နာဝင်ချိုလိုက်တာနော်… သူ့ အသံလေး .. သူ့ ပန်တီလေး…. သူ့ ဘယာလေး… အော် .. သူသူ .. သူ……..
ဒီလိုနဲ့ မောင်သင်းတိုက်ခန်းရှေ့ရောက်တော့ … ကောင်မလေးကို နှုတ်ဆက် … ပီးတော့ တိုက်ခန်းပေါ်တက်ခဲ့ပါတယ်…
ဆေးရုံပေါ်ရောက်နေသော မောင်သင်းဆီ စိတ်ရောက်နေပီး .. မတွေ့တာ ကြာသော ဘကြီးကိုလည်း တွေ့ချင်နေပါတယ်။
တိုက်ခန်းသော့ ခတ်ထားတယ် ။
“ ဟာ ဒုက္ခ ပါပဲ … လူလည်း မရှိပါလား…”
ဆေးရုံ လိုက်သွားရန် ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်………
ဒါနဲ့ … ဆေးရုံသို့ သွားရန် ကားငှားရင်း ရင်ထဲမှာတော့ လှပတဲ့ နတ်သမီးလေး ကို တမ်းတ နေပါတော့တယ်။
ဆေးရုံရောက်တယ်ဆိုရင်ဘဲ ……… မောင်သင်းရှိလာ အခန်းကို မေးမြန်းပီး… သွက်သွက်လေး လျှောက်လာလိုက်တယ်။
အော် ဆေးရုံဆိုတာ .. နပ်စ်မလေးတွေ နဲ့ စုစည်းထားတာကိုး ………. မြင်ကွင်းထဲ ဝင်လာသော နပ်စ်မလေးများကို
အားရပါးရ …. ကြည့်ဖြစ်လိုက်တယ်။
“ ဟေး တူကြီး …” ဘကြီးထောင်၏ အသံကို ကြားတော့မှ မောင်သင်း အခန်းရှေ့ ရောက်နေမှန်း သိလိုက်တယ် ။
ဘကြီးကို နှုတ်ဆက် ၊ ညီဖြစ်သူ မောင်ကြီးကို မေးမြန်း ပီး ……… စကား ပြောဖြစ်နေလိုက်တယ်။
ဆေးရုံရောက်မှ မတွေ့တာ ကြာပီဖြစ်သော ညီ့ မိန်းမ လှလှကို နှုတ်ဆက်ဖြစ်လိုက်တယ် ။
ညီဖြစ်သူ မောင်သင်းမှာတော့ အိပ်ယာပေါ်တွင် အသာအယာလှဲပီး အိပ်နေလေရဲ့ ။
“ အစ်ကို မောင်ကြီး … အိမ်လာလည်အုန်းလေ ”
လှလှက ဖိတ်မှန်တက ပြုရှာပါတယ် . ဒါပေမယ့် ညီလေးကို စောင့်ရှောက်ပီး အိပ်ရန် စီစဉ်လိုက်ပါတယ်။
“ ညီမ ရေ အကို အိမ်ပြန်ရေချိုးပီး ညနေကျရင် ဆေးရုံမှာ လာအိပ်ပေးမယ်နော် ၊ နေခင်းတော့ မြို့ထဲ သွားလိုက်အုန်းမယ်”
ဘကြီးကိုလည်း အားရပါးရ စကားပြောကာ မြို့ထဲသွားဖို့ စိတ်ကူးလိုက်ပါတယ် ။ ကြည့်ရတာ ဘကြီးက တော်တော်သန်သန် မာမာ ပဲ ၊ အသက်နဲ့ သန်တာက….မလိုက်ဖူးလို့ ရင်ထဲမှာ ပြောနေမိတယ်။
အော် ဘဝ ဘဝ ဆေးရုံရောက်သွားပီပေ့ါ ။
ဒီနေ့တော့ မြို့ထဲမှာ တော်တော်ကြာအောင် လည်လိုက်တယ် ။ ဝယ်စရာ ရှိတာဝယ်ရင်း ညနေ မောင်သင်းရဲ့ အိမ်ကို
တိုက်ခန်းရောက်တော့ … ညနေစောင်း ဘကြီးက ဘယ်ရောက်နေမှန်းမသိ . .. ညီမဖြစ်သူ လှလှက သူ့ ကလေးကို ထမင်းကျွေးနေလေရဲ့ ။
“ခလေးက ချစ်စရာလေးနော် ညီမ ၊ လှလှနဲ့ တူလို့နေမှာ ” စကားစမီ ပြောရင်း .. ရေချိုးဖို့ …. လုပ်။
ခဏကြာတော့ ဘကြီးထောင်ပြန်ရောက်လာပါတယ် ၊ … ဘကြီးနဲ့ စကားပြော ၊ ထမင်းတူတူစား .. … ပြီးတာနဲ့ ကားငှားပီး ဆေးရုံကို တန်းလာလိုက်တယ်။ မောင်သင်းဆေးရုံရောက်နေတာနဲ့ဘဲ ဘကြီးကို … ကောင်မလေးကြောင်းမမေးမိသေးဘူး ။
ညပိုင်း မောင်သင်းနဲ့ အလာဘ သလာဘ ပြောဖြစ်တယ်လေ။ သူကတော့ တော်တော်သက်သာနေပုံပါ …
“ မောင်သင်းရေ မင်းကတော့ ကံ ကောင်းပါတယ်ကွာ … မိန်းမက လှ … ငယ်ကလဲ ငယ် …အင်း မင်းတော့ …အားရစရာကြီးပေါ့ ”
ညီဖြစ်သူကတော့ ကျေကျေနပ်နပ်ကြီးနားထောင်နေကာ .. အစ်ကိုလူပျိုကြီးကို ..မိန်းမယူဖို့ တိုက်တွန်းနေတော့တယ်။
ရင်ထဲမှာတော့ အစ်မ မထွေးရီ အိမ်ကို လွမ်းနေပါတယ် .. ……
အော် ဒီအချိန်ဆို … ညီမလေး ..စန္ဒာ ဘောင်းဘီရှည်လေးနဲ့ လှနေလောက်ပီ။
ညရောက်တော့ ….. ဆေးရုံမှာ ညီဖြစ်သူဘေး … ထိုင်ခုံလေးမှာ အိပ်ဖို့ ပြင်လိုက်ပါတယ်။
ထူးထူးဆန်းဆန်း ….. ဖြစ်နေတာက …… ဖွားဖက်တော် ညီလေးပေါ့….
ဟာ ဒီကောင်ဘာ ဖြစ်နေတာလဲ … ကိုယ့်ဟာကို စဉ်းစားရင်း .. ဆီးသွားရန် အပြန်ထွက်လာလိုက်တယ်….
ဆေးရုံက…… ..အိမ်သာကို လိုက်ရှာနေတုန်း … စကားပြောသံ သဲ့သဲ့ ကြားလိုက်ရတယ်…
သူနာပြုဆရာမလေးတွေ နားနေခန်းထဲ …. စကားပြောနေကြတာ .
သူတို့ဘဲ တွေ အကြောင်းပေါ့ … ညကလည်း ညက်နက်နေ . .လူလည်းရှင်းတော့ စကားလွတ်လွတ်လပ်လပ်ပြောကြတာ
ဘယ်လို ချိန်းပီး ….. တွေ့တယ်ပေါ့ ၊ ဘဲက … မပြင်မှာတွေ့ရင် တအားဆွဲတဲ့အကြောင်း ။ သူလည် တော်တော် ဖီးလာကြောင်း ၊ အပြိုင်အဆိုင် …. ဘဲကြွားနေတာ ကြားလိုက်ရပါတယ်…
““ ဟာ အတော်ပဲ ”” ခိုးနားထောင်အုန်းမှ …..
အခန်းဝမှာ လူသူကြည့်ပီး … ဆက်နားထောင်နေလိုက်တယ်….
တော်တော်ကို အားရပါးရ ပြောတာဗျာ …. ကြမ်းမှ ကြမ်း…. ပြောတာ..ပြောတာလေ…. ညီလေးတောင် .. ထောင်ပီးအရည်တွေစို့လာတယ်….ကြားတာနဲ့ ဒီလောက်တောင်ဖြစ်ရလား. ညီလေးရယ် …
မြို့ရောက်မှ တော်တော်သောင်းကြမ်းနေပီကိုး …………..။ . 8)
ဒါနဲ့ .. အိမ်သာထဲ အပြေးလေး အစည်းအဝေး လုပ်ဖို့ သွားလိုက်တယ် ..အော် မျက်စိထဲမှာက ညီမလေး ၊
နားထဲမှာက နပ်စ်မလေးတွေရဲ့ အသံ ….. ……..
အိမ်သာထဲ ရောက်တော့…. ဘေးကရေချိုးနေတဲ့အသံကို ကြားလိုက်ရပါတယ်။
ချောင်းချင်စိတ်ပေါ်တာပြန်ရော ၊ ဒါနဲ့ ဘယ်လိုချောင်းရင် ကောင်းမလဲလို့ ကြံနေတုန်း
ဆေးရုံရေချိုးခန်းထဲမှာ မိန်းခလေးတစ်ယောက် သီချင်းညည်းရင်း … ရေချိုးနေတာ ကိုသိရတယ်ပေါ့ ။
အပေါက်လိုက်ရှာပီး ချောင်းဖို့ လုပ်လိုက်တယ် …. ရေချိုးခန်းနဲ့ကပ်နေတဲ့ အိမ်သာထဲကို အသာဝင်.. ပီးတော့အသံမကြားရအောင် အပေါက်လေးတွေလိုက်ရှာ ၊ ကံကောင်းချင်တော့ အပေါက်လေးတစ်ပေါက်တွေ့လေရဲ့ ဒါနဲ့ပဲ အပေါက်လေးနားလေးကပ်ပီး ကြည့်လိုက်ချိန်မှာ ………..
… ::) ဟာ လှလိုက်တဲ့ ကိုယ်လုံးလေးဗျာ .. မမှတ်မထင် တွေ့လိုက်ရတာက…. အသားညိုညို
ဆံပင်တိုတိုလေး ရေချိုးခန်း မီးရောင်အောက်မှာ ၊ အသက်က ၃၀ လောက် ၊ ထွားတာက ရင်သားအစုံ ။
… လှပစွာ မြင်လိုက်ရတယ်….
အော် ညကြီးအချိန်မတော် .. ရေချိုးနေတာကိုး…စိတ်ထဲမှာ တယောက်တည်းတွေးရင်း…ကောင်းကောင်းလေးကြည့်နေမိပါတယ်။
နပ်စ်မလေးက…. ညိုဝင်းနေသော သူ့ နို့လေးများကို တလုံးချင်း သေသေခြာခြာ ဆပ်ပြာလေးနဲ့ ဆေးနေတာများဗျာ…
စို့ချင်စိတ်တွေ တဖွားဖွားပေါ်လာလိုက်တာ မနည်းထိန်းထားရတာ လွန်ရော ၊ 😛 တံတွေးတွေ မြိုချရင်း တအံတဩ ငေးကြည့်နေမိပါတယ် ၊ ……………….
ပီးတော့ ဖြေးဖြေးချင်း ပေါင်တံလေးတွေကို အသာအယာ ပွတ်တိုက်နေလေရဲ့ … ……..
ကြာလိုက်တာဗျာ ပေါင်တံလေးတွေ မှာတင် …………… စိတ်ထဲမှာက ….မြန်မြန်လေး ညီမလေးကို ပွတ်ပါတော့ပေါ့ …
ဟူး ………….. ကြည့်ရင်းနဲ့ဇောချွေးတောင် ပြန်လာပါတော့တယ်။ ပြေးပီးသာ….ရေတူတူချိုးလိုက်ချင်ရဲ့………….အားရပါးရ ကိုင်ဆွဲပီး လုပ်လိုက်ချင်ရဲ့…..
စိတ်ကူးထဲမှာ … ၃ ချီလောက် ပီးသွားတယ်ဗျာ။ လှလိုက်တဲ့ ကိုယ်လုံးလေးဗျာ…..ကြည့်လို့ကို မဝဘူး ။
အား… အား…တီးတိုး ရေရွတ်ရင်း… ညီလေးကို..တအား … ထုပြစ်လိုက်ပါတယ်….ကောင်းလိုက်တာဗျာ
မြို့တက်လာတာ… ထုလို့ကို မဝဘူး………………………….
ကောင်မလေးလည်း ရေချိုးအပီး ခဏစောင့်ပီး …. ညီတော်မောင်ရှိရာ ကုတင်ကို ပြန်လာမိပါတော့တယ် ၊
ဒီလိုနဲ့ မနက်ရောက်တော့ …………. မောင်သင်းကို နှုတ်ဆက်.. ဘကြီးက… အိမ်မှာစောင့်နေမည်ပြောတော့
ဘကြီးရှိရာ မောင်သင်းရဲ့ အခန်းကိုလိုက်လာကာ ဘကြီးနဲ့ စကားပြောဖြစ်ခဲ့ပါတယ် ။
“ အဘရေ … ကျွန်တော် ပြန်လာပါပီ … မောင်သင်းလည်း သက်သာပါတယ် ”
ဒါနဲ့ ရတဲ့အချိန်လေး … ..ဘကြီးထောင်ကို စိတ်ဝင်စားတဲ့ ကောင်မလေး ချောချောအကြောင်းစမေးလိုက်ပါတယ် ။
“ အဘရေ ဒီမြို့က ကောင်မလေးတစ်ယောက်ကို စိတ်ဝင်းစားလို့ ဘကြီှးှဆီအပူကပ် မလို့ ပါ .. ဟဲဟဲ ….”
“ ခွေးသားလေး မောင်မောင် .. မင်းက … ဒါ့ကြောင့် ငါ့ဆီလာတယ်ပေါ့ … ဟုတ်လား ”
ဘကြီးထောင်က ဒေါသနည်နည်း ထွက်ဟန် ဆောင်ကာ ပြန်ပြောပါတော့သည်။
“ ဘယ်က ချောချောလဲ ကွ ”
“ အဘရေ မြို့ပတ်လမ်းက အဘမိတ်ဆွေ ဦးသာကျော်ရဲ့ သမီးထွေးလေးလေ …. ဟီးဟီး ”
ပြောသာပြောရတယ် … … မျက်နှာတော့ တော်တောပူပါတယ်ဗျာ…. အားလုံးလေးစားရတဲ့ ဘကြီးကို
“ အော် အေးအေး ငါသိပီ ၊ မင်း နဲ့အောင်သွယ်ပေးရမှာလား … စိတ်ချ … ငါလုပ်ကြည့်မယ်…. ”
“ ဒါနဲ့ မင်း ဘယ်တော့ ရွာပြန်မှာလဲ …. မပြန်ခင် .. မင်းအစ်မဆီမှာ ခန နေပီး ..အိမ်ပြင်တာ စောင့်ပေးလိုက် ဟုတ်ပီလား”
ဘကြီးက … တာဝန်တွေ ချပေးနေလေရဲ့ ..
ကောင်းလေစွ ကောင်းလေစွ … စိတ်ထဲမှာ ကျေကျေနပ်နပ်ကြီး …. ကို သွားချင်နေပီလေ… …. စန္ဒာ စန္ဒာ… တွေ့ပီပေါ့ ကောင်မလေးရာ… အားရပါးရကို ………….. တွေ့ဖြစ်လိုက်မယ်….
“ ဘကြီး ဘယ်တော့ သွားရမှာလဲ ………ခုလား ”
ဘကြီးက … သူ့သမီးအကြီးမ အိမ်ပြင်မှာကို သွားကူခိုင်းနေပြန်ပီလေ။ ဒါနဲ့ပဲ ရေတောင်မချိုးနိုင်တော့ပဲ အစ်မ မထွေးရီ အိမ်ရှိရာကို မြန်မြန်လေး …. သွားမိတော့တယ် ……………
“ အော်အင်းလေ .. ဘကြီးပြောတာ နားထောင်မှ ချောချောနဲ့ နီးစပ်ရမှာကိုး ” …. ………ဟဲဟဲ……………. 😉
အစ်မတိုက်ခန်းကို ခပ်မြန်မြန်လေး ပြန်ရန် ဆုံးဖြတ်ပီး မောင်သင်းအခန်းမှ ဘကြီးကို နှုတ်ဆက်ကာ ထွက်လာလိုက်သည်။
စိတ်ထဲမှာက … အစ်မဖြစ်သူ မထွေးရီအိမ်ကို ရောက်နေသည် ၊ အော် ငါ့နဲ့နော် . ….ဖြေးဖြေးပေါ့ ဟု …ပြုံးပြုံးလေး ကိုယ့်ကိုကို ပြောနေမိတယ်။
မြန်မြန်ရောက်ရန် တွေ့ရာတက်စီကိုးငှားလာလိုက်သည်၊ မောင်သင်းအိမ်ဝင်နေသောကြောင့် နဲနဲနောက်ကျနေတယ်လေ ၊ ဒီနေ့ကျောင်းဖွင့်ရက်မလို့ အစ်မက ကျောင်းသွားရမှာ ။
နောက်ကျ နေ ရင် တနေကုန် ထိုင်စောင့်ရမှာလေ……….. ;D
“ ကားဆရာ အကိုကြီး မြန်မြန်မောင်းပေးပါလား ……… အရေးကြီးလို့ပါ ”
ကားသွားနေသည်က ရွာက လှည်းသာသာဟု စိတ်ထဲ ထင်နေမိတယ် ……….
အစ်မရဲ့ တိုက်ခန်းရှေ့ ရောက်ပါပီ ။ ကဗျာကယာလေး တိုက်ပေါ်တက်ခဲ့တယ် ၊
တံခါးကို ခပ်လောလောလေး ခေါက်လိုက်တယ် …………
ခန အကြာ တံခါးပွင့်လာတယ်လေ ……………. ဟူး တော်ပါသေးရဲ့ … အစ်မရှိနေသေးလို့ ….
တော်တော် အံအားသင့်သွားတယ်………. တံခါးဖွင့်ပေးတာက … ရင်ထဲက စန္ဒာလေး….
“ ဟီးဟီး ညီမလေး …အစ်ကိုပါ .. …………… အစ်မထွေးရီရော .. ရှိလား ”
မချိုမချဉ် မျက်နှာလေးနဲ့ပေါ့ဗျာ … အဓိက က …….. အဓိက ပေါ့……………. ဟဲဟဲ…
ကျွန်တော် အိမ်ခန်းကို ဝေ့ဝိုက်ကြည့်လိုက်တယ် အစ်မကိုမတွေ့မိ…..
“ အော် အစ်ကို မောင်ကြီး ဒေါ်လေးထွေးရီက … ကျောင်းသွားပီလေ.. ညီမလေးက …. ဒီနေ့ နေမကောင်းလို့ အိမ်မှာ အိပ်နေတာ ………………အခန်းထဲဝင်ပါအစ်ကို …. ”
သွားပါပီဗျာ …နေမကောင်းလို့တဲ့ ………..
အော် ဘာပဲ ပြောပြော ……တနေကုန် အခန်းအောင်းလိုက်မယ်ဟု စိတ်မှာ ဆုံးဖြတ်ရင်း … အဝတ်အိတ်လေးမကာ အခန်းထဲဝင်လာလိုက်တယ် …….
“ မောလိုက်တာ ညီမလေးရာ ……. အခန်းကို အမြန်ပြန်လာရတာ ။ ဘကြီးက အစ်မအခန်းမှာ ပြင်စရာရှိလို့ ဆိုလို့ပါ…………….. ”
ပြောပြောဆိုဆို နေမကောင်းသော စန္ဒာကို လွမ်းမောစွာ အားရပါးရ … ကြည့်နေမိတယ် …
နောက်ဖေးကို သွက်သွက်လေး ဝင်သွားလိုက်တယ် ………… ပီးတော့ ရေပုလင်းကိုကိုင်ကာ ……တဝကြီးကို သောက်လိုက်တယ်လေ………….. အော်…ရင်တွေပူနေတာ ကြာလှပေါ့ …………..
ကောင်မလေးက နေမကောင်းတော့ …. မျက်နှာလေး ညိုးနေလေရဲ့ … … အင်းလေ .. ဂရုစိုက်အုန်းမှပဲ ..
“ ညီမလေး .. နေမကောင်းတာ ကြာပီလား………………….. ဘာဖြစ်တာလဲ …” စကားစလိုက်တယ် …
ကောင်မလေးက … အိမ်နေရင်း ဂါဝန်လေးနဲ့ … အရပ်က ခပ်ရှည်ရှည်လေး…ပီးတော့ဂါဝန်က တိုတိုလေး…အို ပေါင်သားလေးတွေက ဖွေးနေပါရော့လား………..
တောကတက်လာသော … ကျွဲကြီးပမာ … မောင်ကြီးက ……ယုန်လေးလိုနုနယ်သော စန္ဒာကို …စားချင်ဝါးချင်နေပီလေ။
ကောင်မလေး နည်းနည်းရှက်နေတယ် … သူက … ကျွန်တော့ကို ဟိုတနေ့ကအားပါးတရ မြင်ခဲ့ဘူးတာကိုး …
“ အစ်ကို ဒီမှာ ကြာကြာနေမှာလား…………. ညီမက …နေမကောင်း ဖြစ်ချင်တာလေးပါ ..ခေါင်းမူးရုံလေးပါ…ရပါတယ်..”
ကျွန်တော်လည်း ဟိုတနေ့က အိပ်ခဲ့သော အခန်းထဲ ခပ်သွက်သွက်လေး ဝင်လာခဲ့တယ်လေ……..ပီးတော….
ဘယ်လို စတင်စည်းရုံးရမည်ကို ခေါင်းကုတ်ကာ စဉ်းစားလိုက်တယ်……………….ဟူးမလွယ်ပါလား…
လူပျိုကြီး တစ်ယောက် …………… အကြံထုတ်လိုက်သည်………………….
ကောင်မလေးက နေမကောင်းဘူးဆိုတော့ …….. အကြင်နာပေးလိုက်ရင် ကောင်းသွားနိူင်တယ်………..
ဒါနဲ့ပဲ … ကောင်မလေးရှိရာ ..အိမ်ရှေ့ခန်းကို ဆေးပုလင်းလေးကိုင်ကာ ခြေဦးလှည့်လိုက်တယ်………………….
“ ညီမလေး စန္ဒာ … ခေါင်းမူးနေသေးလာ…….ကိုကြီးမှာ ဆေးပါတယ်…. ရော့ သောက်လိုက်နော်… ၇ိုးရိုးပါရစီတီမောပါဘဲ ”
နူးညံ့သော အသံလေးနှင့် သာသာယာယာ ပေးလိုက်တယ်……….
ကောင်မလေးကလည်း…………… ယောင်အမ်းအမ်းနဲ့ ……… ယူလိုက်ပြီး…သောက်လိုက်ပါတယ်……………….
ပီးတော့ … ကျေးဇူးတင်သော မျက်လုံးလေးနှင့် …….ပြန်ကြည့်ရင်းစကားလာပြောသည်။
“ ကိုကြီးက တောသားဆိုပေမယ့် ဂရုတော့စိုက်တတ်သားနော်… ဟိဟိ ”
“ အော် ညီမလေးရာ အကိုက တောသားဆိုပေမယ့် .. ဒါပေမဲ့ ချစ်တတ်တဲ့ နှလုံးသားတော့ရှိပါတယ်……. ယုံလား ..”
“ ပီးတော့ ချစ်သူမရှိသေးလို့ လူပျိုကြီး ဖြစ်နေရတာပါ ”
ကောင်မလေးတော့ ကျွန်တော့ အပြောမှာ စမျောနေပီ …………….. စိတ်ထဲမှာ.. ကြည်နူးလာသည်။
စကားပြောနေရင်း…ကောင်မလေးနား အသာကပ်ကာ………….. ဘာမှမပြောဘဲ ခေါင်းလေးကို ကြင်နာစွာ ပွတ်သပ်လိုက်တယ်…..ပီးတော့…
“ ညီမလေး .. အစ်ကို .. ညီမလေးခေါင်းမူးတာ ကောင်းသွားအောင် လုပ်ပေးမယ်နော် ညိမ်ညိမ်လေးနေ နော် … နာရင်ပြော ”
တတ်သမျှ နှင့် ကောင်းသွားအောင် လုပ်ပေးမယ် ဟု ဆုံးဖြတ်ပီး…………..
ကောင်မလေးပုခုံးသား ဝင်းဝင်းလေးတွေကို ……….. နူးညံ့စွာ ဖျစ်လိုက်တယ်..
ကောင်မလေးကလည်း … အသာအယာပင် ………. ကိုကြီး ကန်တော့နော်ဆိုပီး …လိုက်လျောလာတယ်၊
“ ညီမလေး ခံရတာ သက်သာလား……….. ကောင်းရဲ့လား…. နာရင်ပြောနော်… ကိုကြီးလက်က ကြမ်းတော့ အားနာတယ်… ”
စန္ဒာရဲ့ နူးညံ့သော ပုခုံးလေးကို ဖြေးညင်းစွာကိုင်တွယ်ရင်း စိတ်ထဲမှာတော့……….. တော်တော်ကို သာယာနေမိတယ်………….. အော်………….. ကုန်းနမ်းလိုက်ရရင်ဖြင့် ..ကောင်းလေစွ ကောင်းလေစွ …………..
အတန်ကြာ .. ကြာသောအခါ … ကျွန်တော့၏လက်လေးများကို………….. ပခုံးပေါ်မှ …လက်ပြင်ပေါ်သို့ နဲနဲချင်း ရွေ့လိုက်တယ်… ပါးစပ်လဲ တတွတ်တွတ်စကားပြောရင်းပေါ့………..
အော် .. ကောင်မလေးနေမကောင်းတာ… တောသားတော့….နတ်ပြည်ရောက်တာဘဲ လို့ … ထင်နေမိပါတော့တယ်…။
“ ကိုကြီး … ညီမလေး သက်သာလာပါပီ ……….. ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် နော်….”
ညုတုတု အသံလေးနဲ့… ပြန်ပြောနေပြန်သည်၊
ကျွန်တော်လည်း အစ်မ မထွေးရီမရှိတုန်း ……..ဒီနေ့တော့ ခရီးပေါက်အောင် သွားရန်ကြိုးစားလိုက်တယ်…
ကျေပြင်လေးကို … နိုပ်နယ်ပေးနေရင်း…ရှေ့ကို အသာတိုးကာ…………ကောင်မလေးရဲ့ လှပတဲ့ လည်တိုင်လေးကို…. ဖွဖွလေး…နမ်းလိုက်တယ်………….ကောင်မလေးကတော..ထူးခြားတဲ့ ခံစားမှုလေးရတော့ … အကြောလေးများစိမ့်ကာ နဲနဲလေးကော့တက်သွားတယ်…
“ ကိုကြီးမောင်………. ဒေါ်လေးပြန်လာရင် တော့ ဒုက္ခပါဘဲ ..ကိုကြီးဘာတွေလုပ်နေတာလဲ………… ”
စကားလေးပြန်ပြောရင်း… ကျွန်တော့ဘက် မျက်နှာမူလိုက်ပါတယ်…
ကျွန်တော်လည်း မျက်နှာချင်းဆိုင်လေး ခုံပေါ်မှာ …. ထိုင်နေရင်း…. ကောင်မလေးရဲ့ စူးရှသောမျက်လုံးအစုံကို စေ့စေ့ကြည့်ကာ…………. လှလိုက်တဲ့ ညီမလေးရာ…
“ စန္ဒာ .. ညီမလေး … ကိုကြီး ညီမလေးကို အရမ်းချစ်တယ်ကွာ … ”
ဟု တိုးညင်းစွာ စကားပြောရင်း…
ကြမ်းတမ်းလှသော လက်များဖြင့် ထွေးဖက်ကာ…………… ပါးလေးတစ်ဖက်ကို နမ်းရှုံ့လိုက်ပါတယ်…
ရင်ထဲမှာလည်း ဘလောင်ဆူကုန်ပီလေ ……….. စိတ်ကလည်းဝင်စား… ညီလေးကလည်း ဆော်ချင်လှပီလေ။
“ ဟာ ကိုကြီးကလည်း မကောင်းပါဘူး ..ဒေါ်လေးပြန်လာရင် … ဒုက္ခရောက်ကုန်လိမ့်မယ်… နော်… နော် ”
ဘယ်လိုပင် စိုးရိမ်စိတ်ဝင်နေပေမယ့် ကောင်မလေး စိတ်ထဲမှာတော့ …. တောသားမောင်မောင်ကြီးကို သာယာမှုနဲ့ အကြင်နာတွေ ပေးချင်နေပါတော့တယ်……………….
ကျွန်တော်လည်းနမ်းကောင်းကောင်းဖြင့် မရေမတွက်နိုင်အောင် ကောင်မလေးရဲ့ပါးအိအိလေးကို နမ်းရှိက်နေဆဲမှာ အသိစိ်တ်ပြန်ဝင်လာသည် ။
“ ဟာ နာရီကို ကြည့်အုန်းမှ ဘဲ … ”
နံရံပေါ်မှ …နာရီလက်တံကို …စိတ်ပူစွာဖြင့် ကြည့်လိုက်မိတယ် ..
“ အော် တော်ပါသေးရဲ့ ၃ နာရီ နီးပါးပဲ ရှိသေးတာကိုး ”
ကျွန်တော် စကားမပြောဘဲ တိတ်တိတ်နေသော ညီမလေးစန္ဒာကို စကားစ လိုက်တယ်…
“ ညီမလေး ကိုကြီးကို ပြန်ချစ်မှာလား ” ကိုယ့်ကိုကိုယ် အများကြီးနမ်းပီးမှ ချစ်လားမေးနေသောကြောင့် ရီချင်လာသသည်။
“ အို အကိုကလည်း … ဒီလောက် ရင်ခွင်ထဲမှာ အဖက်ခံထားပီး အခါခါ အနမ်းခံနေတာကို မေးနေသေးတယ် ”
ကောင်မလေးရဲ့ ရွန်းလဲ့နေသောမျက်လုံးကို ကြည့်ရင်း …… နှုတ်ခမ်းပါးပါးလေးမှ .. ချစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့ ပြန်စကားကို ကြားချင်နေပါသေးတယ်….
ကျွန်တော်မောင်မောင်ကြီးလည်း အစ်မပြန်လာချိန် ဝေးသေးတော့…. ကောင်မလေးနဲ့ ချစ်ရည်လူးရန်ကြိုးစားပါတော့တယ်….
စန္ဒာ့ရဲ့ ခြေသလုံးလေးသွယ်သွယ်လေးတွေ .. ပေါင်တံဖွေးဖွေးလေးတွေကို အသာအယာ ပွတ်သပ်ရင်း ကြည်နူးဖွယ် စကားပြောနေမိပါတယ်..
ငြိမ်ငြိမ်နေရန် စ်ိတ်က ဆော်ဩနေသော်လည်း ဖွားဖက်တော် ညီလေးကမနေ ………………သံချောင်းအလား… ကောင်မလေးကို .. ဖက်ထားရင်း သွားသွားထောက်နေမိတယ်….
ဒီလိုနဲ့ ..ကောင်မလေးရဲ့ပါးလေးကို နမ်းနေရင်း …….နှုတ်ခမ်းပါးပါးလေးကို..အားရပါးရ ဆွဲစုတ်လိုက်ပါတယ်….
အားချိုမိန်တဲ့ အနမ်းဆိုတာ ..ဒါပါလားဟု မိမိဘာသာ ရေအရွတ်ရင်း….
တအီးအီးနဲ့ ကောင်မလေးတယောက်ကတော့ ကျွန်တော့ရင်ခွင်ထဲမှာ … မိန်းမောလို့နေလေရဲ့…
ကျွန်တော်ကလည်း လူပျိုကြီးဆိုပေမယ့် … …….ဒါမျိုးတော့တတ်တယ်လေ………နှုတ်ခမ်းများကို အခါခါနမ်းရှိုက်နေရင်း… မနူးညံ့သောကျွန်တော့လက်များက ………..ကောင်မလေးရဲ့ ရင်သားအစုံကို ပွတ်နေမိပါတယ်………………….
ကောင်းလိုက်တဲ့ အထိအတွေ့……………..ကျွန်တော်နှင့်စန္ဒာ လောကကြီးကို ခတ္တမျှ စိတ်တူကိုယ်တူ မျောပီး မေ့နေမိတယ် .. စ်ိတ်ထဲမှာတော့……မီးတွေတောက်လောင်ကာ ပလောင်ဆူနေပီလေ………………..
“ အကို ညီမကို တကယ်ချစ်တာလား ………” မထိတထိ ကျွန်တော့ ကိုဖက်ရင်းမေးခွန်းထုတ်လာသည် ၊………….
“ ချစ်တာပေါ့ စန္ဒာရယ် ” လို့ တိုးတိုးလေး နားရွက်လေးနားကပ်ကာ…ပြောရင်း
ဒါနဲ့ဘဲ ..စိတ်ထဲမှာ………….ကောင်မလေးရဲ့ ညီမလေးကို ထိတို့ရန်….ကြိုးစားလိုက်ပါတယ်….
အော် ချစ်တယ်အခုပြော……….ပီးတော့ နမ်း………..ပီးတော့……… လုပ်ရန်ချောင်းနေသော ကိုယ့်ကိုကိုယ်…တော်တော်ရီချင်နေတော့တယ်………….
“ ချစ်တာပေါ့ညီမလေးရယ်………….ဘယ်လိုပြောပါလိမ့်………….. တွေ့ထဲက…ကိုချစ်နေတာ ”
ချစ်စကားတွေဆိုရင်း … ထိုင်နေရာမှ…… ကောင်မလေးကို ဆွဲကာမလိုက်ပါတော့တယ်……….. နှစ်ဦးသားမတ်တပ်ရပ်လေးပေါ့… ဒါပေမယ့် … ဧည့်ခန်းထဲမှာလေ…………..
ဒါနဲ့ပဲ … ကောင်မလေးကို…အသာပွေ့ချီပီး ကျွန်တော့အခန်းကို မြန်မြန်လေး လှမ်းလာလိုက်တယ်။
ပိန်သွယ်သွယ်ကောင်မလေးက ကျွန်တော့လက်ပေါ်ဝယ် ကလေးလေး တစ်ယောက်ပမှာ လိုက်ပါလာရင်း အခန်းထဲရောက်တော့ကောင်မလေးက ရီဝေသောမျက်လုံးလေးနဲ့ ကြည့်ကာ ကုတင်ပေါ်တင်လိုက်တယ် …
“ ညီမလေး… ခွင့်လွတ်နော်………….. ”
စကားတော့ ခံလိုက်ပါသေးတယ်…ဒါပေမယ့် ………… မောင်ကြီးမှာတော့ ပုဆိုးမရှိတော့ပါ…..အားရပါးရထောင်မတ်နေသော ကျွန်တော့ ညီလေးက …………… ကောင်မလေးကို… မျက်စိမိတ်နေပီလေ… ဒါနဲ့ ..ကျွန်တော်လည်း အချိန်ဆွဲမနေတော့ပဲ … ကောင်မလေးရဲ့ ဂါဝန်တိုလေးကို အမြန်ပင့်တင်လိုက်တယ်…..
ပီးတော့…………..နှုတ်ခမ်းကိုလည်း မပြတ်နမ်းကာ……….. ပန်တီလေးပေါ်မှ သာသာယာယာပွတ်ပေးလိုက်တယ်…..
အော် နူးညံ့လိုက်တာနော်…………. ဖေါင်းအိနေတာပဲ…………. သတိထားမိချိ်န်မှာတော့ စန္ဒာလေးတယောက်မျက်လုံးလေးမှေးနေတာ တွေ့လိုက်ရတယ်……………. ပြီးတော..ပန်တီလေးမှာလဲ တော်တော်ကိုစိုနေပီလေ… သဘောတော့………….ပေါက်လိုက်ပါတယ်… ညီလေးကတော့ ဆဲနေတာပေါ့…. ကြာလို့ ..
ကျွန်တော်အလိုက်သင့်လေး ကောင်မလေးလက်ကို… ညီလေးပေါ် ရွေ့ပေးလိုက်တယ်……….. ပူနွေးနေသောညီလေးကို နူးညံ့သော အိစက်သောလက်လေးနဲ့ စုပ်ကိုင်ပီး… တအီးအီးဖြင့် ဖက်ထားတာ ..ခံစားလိုက်ရတယ်….
ကျွန်တော်လည်း…ကောင်မလေး ပန်တီလေးကို ယုယုယယလေး … ချွတ်လိုက်တယ် ..ပီးတော့…. အမွှေးနုနုလေးများနဲ့ ဖုံးထားသောကောင်မလေး ပိပိလေးကို………… အာရပါးရကြည့်နေမိတော့တယ်….
“ စန္ဒာ ………..အကိုမနေနိုင်တော့ဘူး … ဖြေးဖြေးလေးလုပ်ပါ့မယ် နော် ..”
တဖွဖွ ပြောရင်း……….ကောင်မလေး …ပေါ်အသာအယာလေး …မှောက်လိုက်ပါတယ်… ပီးတော့..
ကောင်းလိုက်တာ ညီမလေးရယ်လို့ …ပြောလိုက်ချင်ရဲ့ .. ဒါပေမယ့်…..မပြောဖြစ်ပါ…
ကြိတ်ပီး….နည်းနည်းချင်း…. ထိုးထည့်လိုက်ပါတယ်……..တင်းကြပ်တဲ့… အတွေ့အထိနဲ့……….ကောင်မလေးဆီမှ…
တောသားက….မစားရ အငမ်းမရပေါ့……………. အားရပါးရ ဆောင့်လိုက်ပါတယ်…….
တအားအား…အော်သံနဲ့အတူ ညီလေးက… မနားတမ်း ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်ပေါ့……..
ချွေးလေးများတောင် စို့လာတာတွေ့လိုက်ရတယ်…ကောင်မလေးနဘူးမှ………. …..
ကျွန်တော်…သတိထားမိချိန်မှာတော့… ကောင်မလေးကျွန်တော့အောက်မှာ ..လူးလှိမ့်နေလေပီ……….
ကျွန်တော့မှာတော့ နတ်ဩဇာ စားနေရသကဲ့သို့………. ပီတိတွေဝေရင်း..မနားတမ်း…အားရပါးရကို ပုံစံမပြောင်းဘဲ ..ဆက်တိုက်လုပ်နေမိပါတယ်………..
ကုတင်လေးမှာတော့ သွက်သွက်ခါအောင် လှုပ်ခါရမ်းနေတာပေါ့… ၊
ပြင်းထန်လာသော အသက်ရှုသံများကြားမှ ကောင်မလေးက… ကျွန်တော့ကို တင်းကြပ်စွာ ဖက်ထားပါတော့တယ်….
တအီးအီး ညည်းသံနှင့်အတူ ……….ကောင်မလေးလူးလှိမ့်ကာ …..နေပါတော့တယ်……
နှုတ်ခမ်းလေးကို နမ်းလိုက် ၊ လည်တိုင်လေးကို နမ်းလိုက် နဲ့ ..အလုပ်ကို ရှုပ်နေတာပေါ့
ကျွန်တော်လဲ ပထမဦးဆုံး ..အားရကျေနပ်အောင်လုပ်ပေးမယ်ဟု ဆုံးဖြတ်ပီး………….. အားရပါးရကို ဆောင့်ဆောင့်သွင်းနေမိပါတယ်………………
တဖတ်ဖတ်…၇ိုက်သံနဲ့အတူ……….. ကောင်မလေးမှာ မောင်ကြီးစိတ်ကြိုက်လုပ်ပေးနေတာကို ခံစားရင်း……
“အား .. ….ရှီး…အား…..ရှီး……အီး…………………. ကိုရေ …………”
ဖြင့် ကျွန်တော့ရင်ဘတ်အား ကုတ်ခြစ်ကာ…………ပျော့ခွေသွားပါတော့တယ်……
ဒါနဲ့ပဲ သိလိုက်ပါတယ် … ကောင်မလေး ပီးသွားပီပေါ့…………………
သိသိချင်း.. ခပ်မြန်မြန်လေး…ဆောင့်နေလိုက်ပါတယ်………………… မကြာလိုက်ပါ… ညီလေးကလည်း….
ကောင်မလေးအဖုတ်လေးထဲမှာ ………… တပြွတ်ပြွတ်နဲ့ ပန်းထုတ်လိုက်ပါတော့တယ်…………….
“ အား… ညီမလေး…………………. ချစ်တယ်ကွာ..အများကြီး……..”
ကျေနပ်သောအပြုံးလေးဖြင့် ကောင်မလေး နဘူးကို ယုယစွာ နမ်းရှုံလိုက်သည် ။
ဂါဝန်လေးမှာလည်း… အပေါ်သို့ တွန်းတင်ပီး ဖိထားသောကြောင့်……………တွန့်ကျေနေပါတယ်…
အတူတူ.. အိပ်ယာပေါ် ….လှဲအိပ်နေလိုက်ပါသေးတယ်….ခနနေတော့မှ သတိဝင်လာတော့တယ်…
“ ဟာ အစ်မပြန်လာခံ နီးပီ …” အားရပါးရလုပ်နေတုန်းကတော့…. ဘာကိုမှမသိ…လောကကြီးပင်မေ့နေလိုက်တယ်.
အခုမှ ကျွန်တော် အစ်မပြန်လာမှာကို လှန့်နေမိတယ်…
“ လာ ညီမလေး…. ” ဟု ပြောကာ..ကုတင်ပေါ်မှ …အတင်းဆွဲထူလိုက်တယ်……
ပီးတော့..အတူတူ ရေချိုးခန်းသို့ …. သွားကာ…..အပြန်အလှန်…အကြင်နာတွေပေးနေလိုက်တယ်…
တော်ပါသေးရဲ့ ….အစ်မ မလာသေးလို့….
နာရီကြည့်တော… ၅နာရီ ထိုးနေပီလေ……….
“ အစ်ကို…ဒေါ်လေးက……………..၅ နာရီခွဲလောက်ဆို ..ပြန်ရောက်မှာ…………….”
“ အော်ဒီလိုကိုး………..ဟီးဟီး သိဘူးလေ….”
ကျွန်တော်လည်း ..အစ်မ မပြန်လာခင်……ရေမြန်မြန်ချိုးလိုက်တယ်…ပီးတော့.. ဘာမှမဖြစ်ချင်ယောင်ဆောင်ပီး…..ဧည့်ခန်းမှာ ..ထိုင်ရင်းအစ်မပြန်အလာကို…သတင်းစာ ဖတ်ကာ စောင့်နေလိုက်ပါတယ်…………….။
ခနအကြာမှာတော့ စန္ဒာလေးဟာ ……….အားလုံးအတွက် ညစာ စားရန် …ပြင်ဆင်နေပါတော့တယ်၊
ဒေါက်ဒေါက် .. တံခါးခေါက်သံနှင့်အတူ…အစ်မတစ်ယောက်ပြန်ရောက်လေပီ။
“ ဟဲ့ မောင်ကြီး ဘယ်လို လုပ်ပီး အိမ်ပြန်ရောက်နေတာလဲ …. မောင်သင်းရော သက်သာရဲ့လား ”
အစ်မက………. အပြင်မှ ရောက်ရောက်ချင်း အံအားသင့်ကာ မေးခွန်းတွေ မေးနေတယ်လေ ။
ကျွန်တော်လည်း အိနြေ္ဒဆောင်က သေခြာပြန်ပြောနေလိုက်ပါတယ်…
“ ဟုတ်တယ်အစ်မရေ နေကောင်းနေပါဘီ … ဘကြီးက အစ်မ အိမ်မှာ ပြင်စရာ ရှိတယ်ဆိုလို့ ..လာနေပေးနေတာလေ”
အစ်မနဲ့ စကားတော်တော်ပြောနေချိန်မှာတော့ .. ညီမလေးစန္ဒာက ချက်ပြုတ်နေတာပေါ့…
ခနနေတော့ ညစာ ထမင်း အတူတူစားကြတယ်လေ….
ထမင်းစားပွဲဝိုင်းမှာ ….မျက်နှာချင်းဆိုင်လေး ကောင်မလေးနဲ့ ထိုင်ကာ …. အစ်မ မသိအောင် .. ခြေထောက်လေးတွေနဲ့ တို့လိုက်ထိလိုက် ၊ ထမင်းစားလိုက်ပေါ့ …. အစ်မဖြစ်သူကတော့ ဘာမှမသိရှာ…………..
အော်..အချိန်က ကြာလိုက်တာကွာ ……….. တီဘီသာကြည့်နေတယ် မျက်လုံးက ကောင်မလေးဆီမှာ တချိ်န်လုံး .. အစ်မအလစ်ကိုစောင့်ကာ……………အကြံထုတ်နေလိုက်ပါတယ်….
သိပ်မကြာပါ…. အစ်မက မနက်ဖြန် ကျောင်းသွားတဲ့ချိန် အိမ်မှာ နေရန်နဲ့ ..အိမ်ပြင်စရာတွေကို မှာကြားပါတယ်။
“မောင်ကြီး အိမ်မှာက မိန်းမသားကြီးပဲလေ .. ရေပိုက်တွေက မကောင်းဘူ.. ပီးတော့ မီးချောင်းတွေလည်း လဲရမယ်”
“ ဟုတ်ကဲ့ အစ်မ .. ကျွန်တော် အားလုံးကောင်းအောင်လုပ်လိုက်ပါ့မယ်….စိတ်ချပါ ”
အစ်မကို …….. အလိုက်သိစွာ … ပြန်ပြောနေမိပါတယ် ၊ ဒါမှ…. စန္ဒာလေးနဲ့ ကြာကြာနေရမယ်လေ….ဟီးဟီး
နာရီကြည့်တော့ ….၁၀ နာရီ ကျော်ပီ ။ အစ်မက ………. တီဘီကြည့်နေသော ကျွန်တော့ကို အိပ်တော့လို့ပြောကာ
သူလည်းအိပ်တော့မယ် ပြောပီး… သူ့အခန်းထဲ ဝင်သွားပါတယ်…
ကျွန်တော့မှာတော့ စန္ဒာလေးကို … စကားပြောရန်ချောင်းနေလိုက်ပါတယ်…. ….
အစ်မတယောက် အခန်းထဲ ဝင်သွားပီးနောက်… ကျွန်တော်လည်း .. ကောင်မလေးနား အသာကပ်ကာ…
“ ညီမလေး.. အိပ်ချင်ယောင်ဆောင်ပီး………….. နဲနဲကြာရင် ပြန်ထွက်လာခဲ့နော် ”
တိုးတိုးလေးကောင်မလေးနားကပ်ကာ … ပြောလိုက်ပါတယ်…. လက်ထဲမှာတော့ .. နူးညံ့သော စန္ဒာ့ရဲ့လက်လေးကို ဆုပ်ကိုင်ရင်းပေါ့ ..
ကောင်မလေးက မျက်စောင်းလေးထိုးကာ…… ကျွန်တော့ ဘိုက်ကို… လိမ်ဆွဲသွားပါတယ်……
အီး….နာလိုက်တာ……………. တော်တော်လေးကို ခံလိုက်ရတယ်…..
အင်းလေ လုပ်ပါစေ… သူက……………ချစ်ဖို့ကောင်းနေတာကိုး။
ဒါနဲ့ ကျွန်တော်လည်း………… ကိုယ့်အခန်းကို ဝင်လာလိုက်ပါတယ်…. တီဘီကိုတော့ ဖွင့်ထားလိုက်တယ်လေ…
အစ်မ မအိပ်သေးရင် မောင်ကြီးတစ်ယောက် တီဘီကြည့်နေတယ်ပေါ့………… အကြံကိုက …..
ဒါနဲ့… တော်တော်ကြာသွားတယ်…………….. စိတ်အထင် ..မိနစ်၃၀ လောက်ရှိရောပေါ့..
“ ဟာ ညီမလေးကလည်း ကြာလိုက်တာကွာ….” တကိုယ်တည်း အာရုံတွေ စုစည်းလို့မရ… ဖြစ်နေတာလေ…
ဒါနဲ့… ရေချိုးခန်းဘက် တံခါးလေး အသာ ဖွင့်ပီး လမ်းလျှောက်လာလိုက်တယ်၊
ရေပဲသောက်ရမလိုလို သေးပဲပေါက်ရမလိုလို နဲ့…ဘာလုပ်ရမှန်းမသိ ဖြစ်နေတုန်း
ကျနော့် နောက်ကျောကို.. နွေးထွေးတဲ့ … အထိအတွေ့လေးနဲ့အတူ … ကောင်မလေး ဖက်ထားတာ ခံစားလိုက်ရတယ်…
“ ကြာလိုက်တာ … စန္ဒာရယ်.. ကို စောင့်နေတာ မိုးလင်းတော့မယ် ”
“ အော် အကို…. ဒါတောင်ဒေါ်လေး တကယ်အိပ်ရဲ့လားလို့ .. သေခြာအောင်စောင့်နေတာ….ခုလည်း မသိအောင်ထွက်လာရတာ…. ဟင်းနော်……..”
ရီဝေဝေ အပြုံးလေးနဲ့….ချစ်စရာကောင်မလေးတစ်ယောက်ရဲ့ မျက်နှာကို နောက်ဖေးခန်း မီးရောင်ဖျော့ဖျော့မှာ မြင်လိုက်ရတယ်၊
အို ဘာပြောကောင်းမလဲ … နောက်ပြန်လှည့်လိုက်ပီး ပ်ိန်ပိန်ပါးပါးကောင်မလေးကို….. အရိုးကျိုးမတတ် ဖက်လိုက်ပါတယ်… ။ သိတယ်မလား….. လက်များဖြင့် တင်းကြပ်စွာ ဖက်ထားရင်း အကြိမ်ပေါင်းများစွာ ကောင်မလေးကို နမ်းလိုက်ပါတယ်….
အသံမထွက်အောင် …. တော်တော် ထ်ိန်းရတယ်ဗျာ………… ညက..တော်တော်လေးကိုတိတ်ဆိတ်နေပီလေ။
“အကို ..အကို နေအုန်း… အစ်မနိုးလာရင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ…” စိုးရိမ်စ်ိတ်များစွာဖြင့် ကောင်မလေးက ကျနော့် ကိုမေးလာပါတယ်…
“ အော်ညီမရာ… စိတ်မပူပါနဲ့ ..အကိုကြည့်နေပါတယ်…..နော်…”
ပြောမယ့်သာပြောရတယ်……………… ကြောက်တော့ကြောက်သား အစ်မက အပျိုကြီးဆိုတော့…..
တင်းကြပ်စွာ ဖက်ထားသော လက်များကို ကောင်မလေးကျောပေါ်မှာ နူးနူးညံ့ ပွတ်သပ်လိုက်တယ်၊
“အကို ..အကို…….ညီမ ဒေါ်လေးနားပြန်တော့မယ်နော်… …နော်…. ခွင့်လွတ်ပါအကို…နော်.. နောက်နေ့ပေါ့နော်…”
ကောင်မလေးဆီမှ ..တိုးညင်းစွား တောင်းပန်သံကို ကြားလိုက်ရတယ်…. အင်းလေ…. သတိထားအုန်းမှပဲ..
သတိထားပီးနေရန် ဆုံးဖြတ်လိုက်ရတယ်… ………အော် လူပျိုကြီးတော့ အမဲသားစားနေရတာကိုး။
ဒါနဲ့ပဲ ကောင်မလေးကို… နောက်ဆုံး အနမ်းလေး ပေးကာ …………. သိုင်းဖက်ထားသောလက်များကို
ဒီလိုနဲ့ လွမ်းမောစွာ ကျန်နေရစ်ခဲ့သော ကျနော် ………… အိပ်ခန်းထဲပြန်လာပီး တညတာကုန်ဆုံးစေလိုက်ပါတယ်။
မနက်… စောစော အစ်မနဲ့ စန္ဒာမနိုးခင် …….. ကျွန်တော်နိုးနေတယ်လေ…………. အားအင်အပြည့်နဲ့ပေါ့…
“ အင်း ဒီနေ့ …. ဘာကိုစပီး ပြင်ရင် ကောင်းမလဲ … မီးချောင်းရယ် ၊ ရေပိုက်ရယ်… ”
ဒါထက်ရေးကြီးတာက လဖက်ရည် သောက်ချင်စိတ်ဝင်လာတယ် ..အစ်မကို ပြောပီး တိုက်ခန်းအောက်က ..ဆိုင်မှာ ထိုင် အုန်းမှပဲ … ပြောပြောဆိုဆို …အစ်မတယောက်နိုးလာတယ်…
“ အော် မောင်လေး နိုးပီလား….. ဒီနေ့ အိမ်မှာနေပီး မီးချောင်းတွေလဲလိုက်နော် .. မင်းညီမလေးက ..ကျောင်းသွားရမှာ …သော့ယူထားလိုက်အုန်း ”
အစ်မပေးသော တိုက်ခန်းသော့ကို အမြန်ယူကာ ..တိုက်အောက်ကို ဆင်းလာပီးဆိုင်မှာထိုင်လိုက်ပါတယ်…..
အရမ်းကြိုက်တဲ့ လဖက်ရည်ကို… ဖြေးဖြေးသောက်နေလိုက်ပါတယ်…
ခနအကြာမှာ တိုက်ပေါ်မှ ..အစ်မဆင်းလာတာ တွေ့လိုက်ရတယ်……မကြာပါ စန္ဒာလည်း လွယ်အိတ်လေးလွယ်ကာ လိုက်ဆင်းလာပါတယ်…
ကျွန်တော်လည်း ကောင်မလေးကို ပြုံးပြလိုက်ပီး … တူတူထိုင်ရန် ဆိုင်ကိုခေါ်လိုက်ပါတယ်…
“ ညီမ .. ကျောင်းဘယ်ချိန် ဆင်းမှာလည်း.. အကို စောင့်နေမှာနော်…..”
“ ဟုတ်ကဲ့ အကို ..ညီမ… စောစော ပြန်လာခဲ့မယ် ကျုတိုရီရယ် မလုပ်ဘဲ ထမင်းစာချိန် ပြန်လာခဲ့မယ်နော် ”
မျက်စောင်းလေး အသာထိုးကာ…. ကျနော်ကို လက်သီးနဲ့ နာနာလေးထုကာ… အနားမှ တလှမ်းချင်းထွက်သွားပါတော့တယ်။
နောက်တကြိမ် .. ကောင်မလေးရဲ့ ကျောပြင်လေးကို ကြည့်ကာ ကျန်နေခဲ့ပါတော့တယ်……..
ကျွန်တော်လည်း…. အိမ်ပြင်ရန် လိုအပ်တာလေးတွေ ဝယ်ကာ… အခန်းရှိရာ မြန်မြန်ပြန်လာခဲ့တယ်…
မီးချောင်းတွေ လဲစရာ ရှိတာလဲ…..လိုက်တယ်… ရေပိုက်ကို တော့ နောက်နေ့မှ ပြင်ရန် … အချိန်ဆွဲလိုက်တယ်….
ညီမလေး ပြန်တာရင်တော့……………. နေ့တဝက်လုံးလုံး ….ဘာတွေလုပ်ရင်ကောင်းမလဲပေါ့….
ထမင်းစားပီး တီဘီကြည့်ရင်း … စန္ဒာ ပြန်အလာကို စောင့်နေလိုက်ပါတယ်…………….
သိပ်တော့ မကြာလိုက်ပါ…………. နေ့လည် ၁ နာရီလောက်မှာ …. ကောင်မလေးတံခါးခေါက်ကာ….ဝင်လာပါတယ် ..
“ ချစ်ညီမလေး .. ထမင်းစားပီးလား…. စားမှာလား….”
“ အကို စားခဲ့ပီ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ကျောင်းမှာလေ ”
စကားလေးချစ်စဖွယ်ပြောကာ ကျနော့ဘေးကို…. ခပ်ဆတ်ဆတ်လေး…ထိုင်လိုက်ပါတယ်…
ကျွန်တော်ကလည်း အနားလာထိုင်သော ညီမလေးကို… ယုယစွာ . ဖက်ထားလိုက်ပီး.. မျက်နှာလေးကို စေ့စေ့ကြည့်ကာ…..
“ အကို ညီမကို စောင့်နေတာ … တညလုံး တမနက်လုံး ရှိနေပီ ညီမလေးရယ်….. ” ပါးပေါ်မှ သင်းပြန့်လာသော သနပ်ခါးရနံ့လေးကိုခံစားကာ……… ပါးပြင်အိအိလေးကို အားရပါးရ နမ်းရှုံ့လိုက်တယ်……………
ချစ်စဖွယ် …. ကောင်မလေးက……….ရင်ခွင်ထဲမှာ ငြိမ်သက်စွာ…. မျက်လုံးလေးမှိတ်ကာ……တိတ်တိတ်လေးပေါ့..
“ ညီမလေး … ဗီဒီယို ကြည့်မလား ကိုကြီး ငှားထားတယ်…. ”
ကောင်မလေးကို မေးကာ… မနက်က ငှားထားသော … အင်္ဂလိပ်ရုပ်ရှင်ခွေကို စက်ထဲထည့်လိုက်ပါတယ်..
ဇာတ်လမ်းက သာမန် အချစ်ဇာတ်လမ်းလေးပါ……… ကျွန်တော် ဖွင့်သာထားတယ် .. စိတ်တော့မဝင်စားပါ..
စ်ိတ်ဝင်စားနေတာက .. အချိန်ရှိခိုက် လုံ့လစိုက်ဖို့လေ…အစ်မ မပြန်လာခင်လေးပေါ့…..
“ ကိုကြီးပေ့ါ ညီမလေးကို မနေ့က …ဘာမှန်းမသိဘူး…….. တော်တော်ဆိုးတယ်…. ”
ကောင်မလေးက နှုတ်ခမ်းလေးဆူကာ………. ကျတော့ကို………….. အပြစ်တင်နေပါတယ်…
“အော်ညီမလေးရာ ချစ်တာကိုး… တားလို့မှ မရတာ… ဟုတ်ဘူးလား” ပီတီတီမျက်နှာလေးနဲ့..ကောင်မလေး
ကျတော့ရင်ထဲမှာ …. တောင်းတမှုတွေ များပီး ပလောင်ဆူလာပါတယ်……… .
ဖက်ထားသော ကျနော့လက်လေးများကို…. လက်မောင်းလေးပေါ်မှ….. အသာအယာ.. ကျေလေးပေါ် ရွေ့လိုက်ပါတယ်။… မနေ့က… တော်တော် ခရီးပေါက်ခဲ့ပေမယ့်… ဒီနေ့ကျတော့ အသစ်လို ပြန်ဖြစ်နေပြန်တယ်…
တော်တော်ကို.. အသုံးမကျတဲ့ အကောင်လို့ ကိုယ့်ဘာသာပြောနေမိတယ်လေ…..
ကောင်မလေးရဲ့ နှုတ်ခမ်းလေးက…. ပါးပါးလေးနဲ့ … အိစက်နူးညံ့နေတာပဲလေ..ကောင်းလိုက်တာ………..
စန္ဒာ့ အပေါ်နှုတ်ခမ်းလေးကို .. ဖြေးညင်းစွာ … စုပ်ယူလိုက်ပါတယ်…. အလိုက်သင့်ကျောပေါ်မှလက်များက…
ညီမလေးရဲ့ .. လှပသော.. ရင်သားအစုံကို အကျ င်္ီပေါ်မှ………… ပွတ်သပ်ပေးနေလိုက်တယ်….
“အကို … ……. ချစ်လားဟင်…. ဘယ်လောက်လဲ ……တသက်လုံးလား…”
ညုတုတု ကောင်မလေးရဲ့ စကားသံကို…. ကြားကြားချင်း… ချစ်တာပေါ့ ညီမရာ… ကမ္ဘာကြီးလောက်ဟု ပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်… ပီးတော့….. ပီးတော့…..
ကျောင်းသွားပီးပြန်လာသော စန္ဒာကို ကျွန်တော်…. မငမ်းမရ…နမ်းလိုက်၊ ရင်သားလေးများကို ဆုပ်နယ်လိုက်ပေါ့..………………
“ အစ်ကို ခနလေးနော် ..ညီမလေး ရေချိုးခန်းသွားလိုက်အုန်းမယ်နော်.. ခနလေးနော်…”
“ မရဘူး… အကိုလည်းလိုက်မယ် …………မခွဲနုိုင်ဘူး..…” ကျနော် စလိုက်တယ်..ပီးတော့..
ရေချိုးခန်းဝထိ လိုက်သွားလိုက်တယ်… ပီးမှ..
“အကို .. အခန်းထဲမှာ စောင့်နေမယ်နော်…..” ပြောပီး မာန်ဖီနေသော ညီလေးကို…ကိုင်ကာ…အိပ်ခန်းထဲဝင်လာလိုက်တယ်..ပီးတော့ တံခါးလေး စေ့ထားလိုက်တယ်….
ကောင်မလေးက ကျောင်းသွားတဲ့ ဝတ်စုံလေးကိုလဲပီး အိမ်နေရင်းဂါဝန်လေး လဲကာ… ဝင်လာပါတယ်..
အငြိမ်မနေနိုင်သော ကျနော်က…. တံခါးလေးနောက်မှာ ရပ်ပီးစောင့်နေလိုက်တယ်….ဝင်လာတာတွေ့တာနဲ့..
လည်တိုင်ဖွေးဖွေးလေးကို… နမ်းရှုံ့လိုက်ပါတယ်…… .. ကောင်မလေးက ကျွန်တော့ဘက်..လှည့်ရင်း… ပြန်ပီးဖက်ထားတယ်…
“ အရမ်းချစ်တယ်…ည်ီမလေးရာ ” ကျတော်လည်း…. နှုတ်ခမ်းလေးတွေကို..မလွတ်တမ်း… စုပ်ယူလိုက်ပါတယ်….
ကြည့်မဝသော ကောင်မလေးရဲ့ မျက်မှာလေးမှ သင်းပျံ့လာသော သနပ်ခါးအနံ့လေးများက… ကျတော့ရင်ကို တော်တော့ကို..နိုးစွနေပါတယ်…
ပါးလေးကို နမ်းလိုက်… နှုတ်ခမ်းလေးကို နမ်းလိုက်နဲ့ပေါ့………………..
“ မွှေးနေတာပဲ ညီမလေးရယ် .. အကိုတော့ နမ်းလို့ကို မဝဘူး ”
ဒီနေ့ … ကောင်မလေးရဲ့အတွင်းဝတ် ဝမ်းဆက်က အမည်းရောင်လေး၊ ကျောက်လေးတွေတောင်အနားမှာ စီထားသေးတယ်…
ကျနော့လက်လေးနဲ့ .. ကောင်မလေးကျောပြင်မှ…ဘယာဇီယာချိတ်လေးကို အသာအယာဖြုတ်လိုက်ပါတယ်.
လှပ အိစက် လုံးဝိုင်းသော နို့လေးတစုံက ……… .. မျက်စိမိတ်ပြနေလေရဲ့….
ကျတော် ကုတင်ပေါ်ကောင်မလေးရဲ့ ပုခုံးလေးကိုကိုင်ကာလှဲချလိုက်တယ်.. . အတူတူလှဲအိပ်..ပီးတော့………… လှပသော နို့လေးကို … အားရပါးရ..စုပ်လိုက်ပါတယ်… ပန်းရောင်ထနေသော..နို့သီးခေါင်းလေးကို.. လျှာဖျားလေးဖြင့်…ကလိလိုက် … နို့တလုံး လုံးကို .. ဆုပ်ခြေလိုက်နဲ့။ တပြိုင်ထဲ. ညီမလေးကို…. နိုးစွလိုက်ပါတယ်…
တအားအား ညည်းတွားသံနဲ့ အတူ………..မျက်လုံးလေးမှိတ်ကာ…..ကျတော့ကို တင်းကြပ်စွာ ဖက်ထားပါတယ်..
သွယ်လျှပါးရှုပ်သော … ဘိုက်သားလေးများကို… … အသာအယာပွတ်ရင်း…. ညီမလေးဆီသို့… ဖွဖွလေး..ပွတ်သပ်နေမိပါတယ်….. အမည်းရောင်ပန်တီလေးက……..အနားသတ်မှာ ကျောက်သေးသေးလေးတွေနဲ့ …………ပွတ်နေရတာကိုပင် .. တော်တော်ဖီးလာပါတယ် ..…
“ မိုက်လှချည်လား ညီမလေးရာ.. ပန်တီလေးက…… ချစ်စရာလေး….”
စကားလေးနည်းနည်းပြောရင်း….ကောင်မလေးဘိုက်လေးကို လျှာဖျားလေးနဲ့ ကလိလိုက်ပါတယ်…
ရင်ထဲမှ ၇ှိုက်သံများ ကြားနေရကာ… ဘိုက်လေးမှာလည်း….လှိုင်းထနေတာတွေ့လိုက်ရပါတယ်…
တပြိုင်ထဲ ပန်တီအောက်မှ အဖုတ်လေးကို … ဖြေးဖြေးချင်း… ပွတ်လိုက်ပါတယ်… ပန်တီလေးကို မချွတ်သေးပဲ အပေါ်မှ…နမ်းလိုက်ပါတယ်…………….. ကျတော့ညီလေးကတော့…………. တဆတ်ဆတ်နဲ့ပေါ့…
နမ်းရှုံ့နေရင်း…. အသာအယာ…. ပန်တီလေးကို.. ချွတ်လိုက်ပါတယ်……………………….
မုန်ဝါးဝါး.. အခန်းလေးရဲ့ အလင်းရောင်အောက်မှာ………..လှပတဲ့ စန္ဒာရဲ့ အဖုတ်လေးကို…အားပါးတရကြည့်နေမိပြန်တယ်။
နူးညံ့နေသော အမွှေးလေးများက……….. ပွတ်သပ်ရတာပင် ….အားမရ…….
ကောင်မလေးတစ်ယောက်.. တအားအား ညည်းတွားရင်း……..
“ ရှီုး…. ရှီုး…….ကိုရယ်……” မောင်ကြီးလည်း…..ကောင်မလေးဖီးပိုလာအောင်…..လျှာဖျားလေးနဲ့..အစိလေးကို..ထိပီးကလိလိုက်ပါတယ်…
ဓါတ်လိုက်သွားသလို ကောင်မလေးဟာ လူးလွန့်နေပါတယ်…. “အကို … အကို….အား……ရှီုး…. အား…”
ကျွန်တော်လည်း..အားရပါးရ ကလိလိုက်ပီး… ပုဆိုးနဲ့တီရှုပ်ကို ..ချွတ်ချလိုက်ပါတယ်………..ပီးတေ့ာ… ကောင်မလေးဘေးမှာ… တစောင်းလေးအိပ်လိုက်ပီး…ကောင်မလေးကို…. အဆက်မပြတ်ဆွနေလိုက်တယ်..
နှုတ်ခမ်းလေးကို.. ပြန်ပီးဆွဲစုပ်လိုက်ပါတယ် .. ကောင်မလေးကလည်း.. .. ညီလေးကို… တယုတယ..ကိုင်ကာ…
အပေါ်အောက် ဂွင်းထုသလို လုပ်ပေးနေပါတယ်……..
အတူတူ…. ဖီးအပြည့်နဲ့……… တစောင်းလေး….လှဲအိပ်နေရင်း…. ကောင်မလေးကို…နည်းနည်းစောင်းလိုက်ကာ…
နောက်ကျောမှ ဖက်သည့်ပုံစံလေးနဲ့………. ကောင်မလေးရဲ့ အဖုတ်လေးကို…နောက်မှ ချိန်ကာ….တေ့ထည့်လိုက်ပါတယ်….
နောက်မှတစောင်းလေး.. လှုပ်ခါလှုပ်ခါ….. အားရပါးရ…. လုပ်နေလိုက်ပီး..လက်မှလည်း ကောင်မလေးနို့များကို..ဆွဲကာနယ်နေလိုက်ပါတယ်… လည်ဂုတ်လေးကို… ကစ်ပေးရင်း…. ကျတော်…ပုံစံပြောင်းလိုက်ပါတယ်….
ကောင်မလေး အပေါ်မှ.. မှောက်လိုက်ကာ…. ညီလေးကို အဖုတ်ထဲ. ညင်သာစွာထည့်လိုက်ပါတယ်…
တညလုံးစောင့်နေလိုက်ရလို့လားမသိ…သိပ်ကြာကြာမဆောင့်လိုက်ရပဲ…………ကောင်မလေးရဲ့ အဖုတ်လေးထဲကိုအားပါးတရ … သုတ်ရေများကို ပန်းထုတ်လိုက်ပါတယ်………
ပီးတော့… ကောင်မလေးကို…နမ်းနေရင်း……….ညီလေးကို…. မထုတ်ဘဲနေလိုက်ရင်း စန္ဒာ့ရဲ့ အဖုတ်လေးထဲမှဖျစ်ညစ်လိုက်တာကို ခံစားနေမိပါတယ်……………
“ ညီမလေး…အကိုနဲ့အတူနေရတာ…ပျော်လား… ”
“ နောက်ကျရင် ဘယ်လိုတွေ့ရမလဲ စန္ဒာရယ်… ”
“ အကို ညီမလေးကို..စွဲလမ်းနေပီ..”
ခနနေတော့…ရေတူတူချိုးရန် …တိုင်ပင်ပီး ရေချိုးခန်းထဲကို….သွားလိုက်တယ်…
တယောက်နဲ့တယောက် ..အပြန်အလှန် …. ဆပ်ပြာလေးတွေတိုက်ရင်း….ကစားနေကြတယ်လေ။
အော်..ညီလေးကလည်း… အထိမခံ ရွှေပန်းကန်လေ…. စန္ဒာ့ရဲ့လက်လေးနဲ့ ဆပ်ပြာလေးတွေ.. အထိအတွေ့မှာ..
ပြန်ပီး..ထောင်နေလေရဲ့ “ တော်တော်ကဲတဲ့ .. အကို့ ညီလေးနော်…. တွေ့လာ…တဆတ်ဆတ်နဲ့ ” ပြုံးရောင်ရောင်မျက်နှာလေးနဲ့ ချစ်စရာ……ဟန်ပန်………….
ကျတော်လည်း….. ရေချိုးနေရင်း…မတ်တပ်လေးမျက်နှာချင်းဆိုင်လေး…ရပ်ကာ…ကောင်မလေးရဲ့အဖုတ်လေးကို..ပွတ်နေလိုက်တယ်…ပီးတာနဲ့ …ပေါင်လေး..တချောင်း..မကာ…….. ညီလေးကို..အဖုတ်ထဲ သွင်းလိုက်ပါတယ်………….
“ အား။။။။။။။။။။။။။ ” အသံလေးနဲ့အတူ……… ခပ်မြန်မြန်လေး…. ဆောင့်လိုက်………. ချော့ပီး…. လုပ်လိုက်…
နှုတ်ခမ်းလေးကို နမ်းလိုက်…. လျှာလေးနဲ့ ကစားလိုက်……နောက်တခါပြန်ပီး..ဆော်နေလိုက်ပါတယ်…..
တအီးအီးအော်သံနဲ့အတူ ရေချိုးခန်းထဲမှာ………….. နှစ်ဦးသားမတ်တတ်ရပ်လေးပေါ့…
ခါးလေးကို အသာကိုင်ကာ….ကောင်မလေးကို…. တဖက်လှည့်လိုက်ပါတယ်… ..ကောင်မလေးကခါးလေးကော့ကာ… နံရံကိုလက်လေးထောက်ပီး…..နေပါတယ်..ကျတော်က….ခါးလေးကိုတင်းတင်းလေးကိုင်က….နောက်ဖက်မှ.ညီလေးကို…သေခြာ…ထည့်လိုက်ပါတယ်…. “ အား…….ရှီုး……” စန္ဒာ့ရဲ့ ရင်ထဲမှ….အသံလေးမျာကို..အားရစွာ ကြားနေရပါတယ်…
အော်… ရေချိုးရင်းလဲ…တခါ… တီဘီကြည့်လဲတခါ….မကြည့်လဲတခါ…အော်….တော်တော်ဆိုးတဲ့ငါပါလား…
အချိန် တော်တော်ကြာကြာဆွဲဖြစ်လိုက်တယ်…ရေချိုးရင်းဆွဲတာလည်း.တခါတလေတော့ တော်တော်ကောင်းသား။
ရေမိုးချိုးလို့အပီး……….. ကောင်မလေးကသူ့အဝတ်များကို…မီးပူတိုက်နေလေရဲ့…ကျွန်တော်လဲ အစ်မပြန်လာချိန်နီးတော့ မျက်နှာပူလာတာနဲ့ ကောင်မလေးကို နမ်းကာ….တိုက်အောက်က.. လဖက်ရည်ဆိုင်လေးကို ဟန်မပျက် ဆင်းကာထိုင်နေလိုက်ပါတော့တယ်။………………………………..
ဒီလိုနဲ့ .. အစ်မ မထွေးရီ မရှိခိုက် လုံ့လစိုက်လိုက်ပေါ့…ဟဲဟဲ.. ကောင်မလေးလဲ တော်တော့ကို စွဲလမ်းနေပီလေ။။
ညနေပိုင်းရောက်တော့ ထုံးစံ အတိုင်း အစ်မကပြန်လာတယ်လေ ၊ သူ့ ကျူရှင်ကျောင်းသားတွေလည်းပါလာတယ်…
“ ဟဲ့ ငါ့မောင်ကြီးရေ နင် ဒီည … မောင်သင်းဆီသွား အိပ်ပါလား ဆေးရုံမှာ.. သူပျင်းနေမှာ…. ”
“ ဟုတ်……ဟုတ်ကဲ့ သွားလိုက်ပါ့မယ်………” မသွားလို့ကလဲ မကောင်း ၊ ဒီမှာကလည်း…. အရှိန်တက်နေ..
အော် ငါ့ဘဝ…. … အပိုင်မိန်းမမှ မရှိတာကိုး… ……….
အင်းလေ..အစ်မသဘောအတိုင်း….. ဆေးရုံကို သွားရမှာပေါ့…
“ အစ်မရေ ထမင်းစားပီး သွားလိုက်မယ်နော်…” အချိန်နဲနဲ ဆွဲကာ စန္ဒာလေးရှိရာ နောက်ဖေးခန်းကို ဝင်လာလိုက်တယ်……..
“ ကောင်းတယ် ကောင်းပါတယ်..ဟေ့..…. ဒီညတော့ အကို ဒုက္ခရောက်ပါပီ……….ကောင်းတယ်….ဟီးဟီး ” 😛 ချစ်စဖွယ် ကောင်မလေးက ကျတော့ကို စ နေပြန်တယ်..ဒါနဲ့ပဲ … ထမင်းပန်းကန်ယူရင်း ကောင်မလေးရဲ့ …တင်ပါးလုံးလုံးလေးကို အားရပါးရ ဖျစ်ညစ်လိုက်တယ် ..
“ အမေ့… ။ …ကိုကြီးနော်…တော်တော်ဆိုးတယ်… ” စန္ဒာ့ဖင်လေးက တင်းတင်းကျစ်ကျစ်လေး…
အီး…ကောင်းလိုက်တာ……… ပြောရင်းနဲ့တောင်… ညီလေးက…ထောင်နေပြန်တယ်….အော် ၃ကြိမ်ဆိုရင်တော့ ဒီကောင်လွန်တာပေ့ါ…….. ဟီးဟီး…..။ 8)
ထမင်း မြန်မြန်စားကာ ကောင်မလေးကို အစ်မအလစ် ..ပါးလေးကို တရွတ်ရွတ်နဲ့ နမ်းလိုက်ပါတယ်…
“ ကိုကြီး မနက်ဖြန် စောစော ပြန်လာခဲ့မယ်နော် စောင့်နေနော်…………. ” :-*
ဒီလိုနဲ့ ဆေးရုံ တစ်ခေါက်ရောက်ပြန်ပီပေါ့………..“ အင်း ဒီနေ့လဲ …နပ်စ်မလေး ရေချိုးရင်ကောင်းမှာပဲ …”
ဆေးရုံရောက်တော့ မောင်သင်းကုတင်နားမှာ လူတွေဝိုင်းနေတယ်လေ…မျက်လုံးတောင်ပြူးသွားတယ်..ဘာဖြစ်လဲပေါ့
အော်..ညီဖြစ်သူ မောင်လေးတို့ရောက်နေတာကိုး ..သူ့မ်ိန်းမလေးရောပါတယ်လေ… ဘေးနားမှာက…………….
ဟိုနေ့က…မ်ိန်းမချောလေး…ရေချိုးခန်းမှာ ချောင်းကြည့်ခဲ့ဖူးတဲ့ …..ညိုဝင်းဝင်းကောင်မလေး…….ဒီးဒီးနဲ့လဲတော်တော်ခင်ပုံရတယ်….
“ ချောလဲ ရောထိုင်တော့..ဖြစ်တော့မယ်…ဟီဟိ …” စိတ်ထဲမှာ…ပျော်လာမိတယ်..လေ။
“ ဟာ ကိုမောင်ကြီး ၊ ညီတို့ရောက်နေတာ ကြာပေါ့… ဒါက.. အစ်ကို့ညီမ ဒီဒီးရဲ့ သူုငယ်ချင်း..လေ၊ ဒီည မောင်သင်းကို စောင့်ပေးမယ့်.. စပါယ်ရှယ်နပ်စ်ပေါ့…….. နာမည်က စ်ိန်စိန်တဲ့ ”
“ တွေ့ရတာ ဝမ်းသာပါတယ် စိန်စိန် …အကိုက .. မောင်မောင်ကြီးပါ .. မောင်သင်းတို့ မောင်လေးတို့ အစ်ကိုဝမ်းကွဲပါ” “ ညီမလေးကို ဟိုနေ့တည်းက တွေ့ဘူးပါတယ်……… အကိုလိုခင်နော် ”
မြင်မြင်ချင်းဝမ်းသာအားရပြောနေမိတယ်… ရေပက်မဝင်ပေါ့……. ပြောနေရင်း ပုဆိုးအောက်က ညီလေးကတဆတ်ဆတ်တုန်ပြနေတယ်လေရဲ့…. သူက ဟိုတနေ့က မြင်ခဲ့တဲ့ ဝင်းဥ နေတဲ့ နို့လေးရယ်… ဖေါင်းကားကား…အဖုတ်လေးရယ်…… ;D……………………………
အော်…ငါ့နယ်နော်………… တော်တော်သောင်းကျန်းနေပြန်ပီ…. ဒီညတော့ စည်းရုံးအုန်းမှပဲ……
ဘေးနားက ညီတော်မောင်နဲ့ သူ့မိန်းမ ဒီးဒီးကိုတောင် ..စကားပြောရန်မေ့နေတယ်လေ…..ဒါနဲ့ပဲ…ဒီးဒီးက..
“ ဟေ့ စိန်စ်ိန်ရေ .. မောင်ကြီးက ..လူပျိုကြီးနော်… စိ်တ်ဝင်စားရင် တခါတည်းခေါ်ထားလိုက် ” မဆီမဆိုင် ကြေညာခံလိုက်ရသေးတယ်…….. ………
“ ဟုတ်လား သူငယ်ချင်း ဒါဆို … မနက်ကျရင် ခေါ်သွားမယ်နော်…”
ကျတော့ကို လှည့်ကြည့်ရင်း…. ပြုံးစစ…လေး နောက်နေပြန်တယ်…….
“ ဟာ ငါ့ညီမလေး…ကလည်း မနောက်နဲ့နော်… ကိုကြီးက ……….” ..တော်တော်ရှက်သွားတယ်…နပ်စ်မလေးတွေက ခပ်ရဲရဲလေး နောက်လိုက်တာကိုး…ကျတော်လူပျိုကြီး…မျက်နှာတောင် ရဲသွားတယ်………ညီလေးတောင်..ဘယ်ရောက်သွားမှန်းမသိ.. ပျော့ခွေသွားတယ်….။
ရှက်သွားသော ကျတော်မောင်ကြီး .. ရှက်ရမ်းရမ်းနဲ့ … အိမ်သာခနဆိုကာ.. လှည့်ထွက်လာလိုက်တယ်လေ။….
ခနကြာမှ.. မောင်သင်းကုတင်နားပြန်လာလိုက်တယ်.. မောင်သင်းကတော့..တော်တော့်ကို နေကောင်းပါပီ..နောက်နေ့ကြရင် လည်းဆေးရုံဆင်းရတော့မယ်လို့ သိရပါတယ်…
“ မောင်သင်းရေ .. မင်းရဲ့ ခွဲထားတဲ့ အနာက….တော်တော်ကျက်နေပီဘဲ… ကောင်းတယ်ကွာ ..” ညီဖြစ်သူကို ဂရုစိုက်ကာ.. ဘေးနားမှ.. မုန့်နဲ့ကော်ဖီကို… ပေးလိုက်ပါတယ်…
“ အကို စိတ်ကူးမလွဲနဲ့နော်.. စ်ိန်စိန်က…တောင့်တောင့်ကြီး.. သူက..ကလေး၂ယောက်ရှိပေမယ့် … ဟဲဟဲ…”
လူနာ မောင်သင်းကပါ.. သဘောလာတူနေပြန်ပီ….
“ အင်းလေ ညီလေးရာ..သနားပါတယ်… ကလေး၂ ယောက်နဲ့ တော်တော် ကသီမှာပဲနော်….” ရင်ထဲမှာ ဂရုနာတောင်သက်မိသွားတယ်….. … အော်..နမြောစရာကြီးပါလား… … ငါကြုံတုံးလေး…သူ့လိုအင်ကိုဖြေ့ဆည်းပေးအုန်းမှပဲ… … တောသားကြီးတော့ …စိတ်ထဲမရိုးမရွ ..ဖြစ်လာတော့သည်။
ထူးဆန်းတာက ဒီနေ့ မိုးတွေရွာနေတယ်… ချမ်းလိုက်တာလည်းတုန်နေတာပဲ …
ဒုက္ခပါဘဲ ဆေးရုံလာတာ…အကျ င်္ီကလည်းပါးပါးနဲ့….. အနွေးထည်လေးလိုချင်လိုက်တာ….
“ ညီမ စိ်ိန်စိန်ရေ … အကို ချမ်းနေလို့ … ရေနွေးလေးမျာ ရှိလားကွယ် ” ညိုချောလေး..စိန်စ်ိန်ကို စကားစလိုက်တယ်။
စိန်စ်ိန်ကလည်း ..ဟုတ်ကဲ့ ၇ှိတယ် အစ်ကို ဆိုကာ…. သူ့တို့ရဲ့ နားနေခန်းကို..ဝင်သွားလေရဲ့ ။ ကျနော်ကတော့.. စွံထွားကာ .. တင်းရင်းနေသော ..စ်ိန်စ်ိန့် ဖင်တုန်းကြီးကို နောက်မှ အားပါတရ ကြည့်ကာ ကျန်ခဲ့ပါတယ။်.. ညီလေးတော့ .. နဲနဲပူလာတာ သတိထားမိလာပြန်တယ် …
“ အော် စိန်စ်ိန်ရယ်…ကောင်းလိုက်တာနော်..ကိုကြီးတော့ ဒီညသွားပါပီ..…” စိတ်ထဲမှာ စကားတွေပြောနေမိတယ်…။
မကြာလိုက်ပါ … လက်ထဲမှာ..ရေနွေးအိုးလေးကိုင်ကာ… စ်ိန်စ်ိန်တယောက် ကျတော်ရှိရာ.. မောင်သင်းအခန်းသို့ ပြန်ဝင်လာပါတယ်… …..
ကံကောင်းတာလား ကံဆိုးတာလားမသိ…. မနေ့ကတည်းက မောင်သင်းက .. စပယ်ရှယ်အခန်းရလို့ …အခန်းပြောင်းပီးသားဖြစ်နေပီလေ … ။
“ စ်ိန်စိန်က .. သနပ်ခါးလေးနဲ့ လိုက်တယ်နော်” “ကိုကြီးက .. တောသားဆိုတော့ သနပ်ခါးဆို အသည်းခိုက်အောင်ကြိုက်တာ ” ထိခပါးရိခပါးလေး… ရေနွေးအိုးကိုင်ထားသော ..လက်လေးကို ကိုင်ကာ ဇာတ်လမ်း စလိုက်ပါတယ်…
အသားလေးက ညိုဝင်းပီး….. အိစက်ဖေါင်းကားနေသော.. ပါးမို့မို့လေး… ပီးတော့ နပ်စ်မ ဝတ်စုံလေး..နဲ့။…
ညက .. တော်တော်နောက်ကျနေပီ ..၁၁ နာရီကျော်ကျော်ပေါ့.. မောင်သင်းကတော့ အိပ်မောကျနေတယ်လေ .. အိပ်ဆေးတန်ခိုးနဲ့ပေ့ါ… ကျနော်ကတော့………… ကုတင်ဘေးနားမှာ စာအုပ်ဖတ်နေသော စိန်စ်ိန့်ကို…ခိုးခိုးကြည့်နေမိပါတော့တယ်…။
“ ညီမ ..စ်ိန်စိန်… အိပ်ချင်ရင် အိပ်နော် ..အကိုက မအိပ်ချင်သေးလို့ .. ”
“ အကို စိန်စိ်န်က ညတိုင်း … နေနေကြလေ… မနက်ကျမှ အ်ိပ်တာ .. အစ်ကို အိပ်ချင်အိပ်နော် ”
စကားတွေ ဖောင်ဖွဲ့ရင်း…တော်တော်ခင်လာတယ်….. ရေနွေးချမ်းလေးသောက်လိုက်…. စကားလေးပြောလိုက်…နဲ့ ..
ကျတော်..စိန်စိန်ကို… စွဲလမ်းလာပါတော့တယ်……….. စ်ိန်စိန်ကလည်း…အထာလေးတော့ ပေးလာပါတယ်…
“ အကိုက မိန်းမ ယူချင်စ်ိတ်မရှိလို့လား .. ဒါမှမဟုတ် ချစ်သူမရှိလို့လား… ” ညုတုတုလေးပေါ့…
“ ညီမရာ ယူစရာမရှိလို့ပါ.. ” ..ပြောပြောဆိုဆို .. စ်ိန်စ်ိန့်အနား ကပ်လျက်လေး ထသွားကာ .. ထိုင်လိုက်မိတယ်…
“ မချမ်းဘူးလား..စ်ိန်စ်ိန် .. .. ဒီနေ့ .တော်တော်အေးတယ်နော် ၊ မိုးကလည်း အချိန်အခါမဟုတ် … ဘာတွေဖြစ်နေလဲမသိတော့ ပါဘူး .. ”
“ ဟုတ်တယ်အကို.. ဒီနေ့တော်တော်ချမ်းတယ်နော် မိုးကလည်း ကောင်းလိုက်တာ…. … ”
စိန်စိန်နဲ့ ကျတော်…. စကားပြောဖြစ်တော့ တော်တော်ခင်ဖို့ကောင်းကြောင်း သိလာတယ်လေ… စိန်စ်ိန်က..သိပ်မငယ်ပေမယ့်…. ခပ်သွက်သွက်လေးစကားကပြောတတ်တာရယ်… ပီးတော့ ခန္ဒာကိုယ်လေးကလဲ မကြီးမသေး…တောင့်တောင့်လေး …. စွဲမက်စရာလေးပေါ့ ။…
ရင်တွေ တဒိတ်ဒိတ်…. ခုန်နေပါတယ်…ပီးတော့…………………
အပြင်မှာလည်း မိုးကတော်တော်ကောင်းနေတယ်လေ ။ ရာသီဥတုကတော့ …ကိုယ့်ဘက်ပါနေတယ်။
“ စိန်စိန်က ……. ညဂျူတီဝင်ရတာ များလား…”
“ ဟုတ်တယ် အကို .. ညပိုင်းဆေးရုံမှာ များပါတယ် ၊နေ့ခင်းမှ အိပ်ရတာ… အိမ်မှာကခလေး ၂ ယောက်တောင် ညီမလေးနဲ့ ထားခဲ့ရတယ်လေ ”
“ အော် … ခလေးတွေခမျာ …သနားပါတယ်နော် ညီမလေးကရော……ဘာလုပ်လဲ ”
“ ညီမလေးက…. ငယ်သေးတယ် အလုပ်မလုပ်သေးဘူး အမေနဲ့ အိမ်မှာနေတယ်လေ ..အရင်ကတော့နယ်မှာနေကြတာ….”
စကားတွေပြောရင်း ဗိုက်ထဲကတဂွီဂွီ တော်တော်ဆာလာပြန်သည်။ ဒါနဲ့ ညီဖြစ်သူ မောင်သင်းကို အနားကပ်ခါ..ကြည့်လိုက်တယ်… ဆေးရုံလာတာ ညီတော်မောင်ကို စောင့်ဖို့လေ ။ တော်ကြာ မောင်သင်းနိုးလာရင် ဘယ်သူမှ မရှိရင် ဒုက္ခလေ ။ ကြံနေတာ ၊ ကြံနေတာလေ စိန်စ်ိန့်ကို … 😉
“ စိန်စ်ိန်ရေ … အကိုနဲ့ တူတူ တခုခုသွားစားရအောင်နော်………… အကိုဗိုက်ဆာနေလို့ပါ.. နော် ”
“ အကို ခနပဲသွားစားမယ်နော်…တော်ကြာ မကောင်းဘူးနော်… ” ခပ်သွက်သွက်လေး…ပြန်ပြောလာသောစ်ိန်စ်ိန်မျက်နှာပေးလေးက… ချစ်ဖို့ကောင်းနေပြန်ရော…..
ဒါနဲ့ပဲ… .. ဆေးရုံဘေးနားက ဆိုင်လေးမှာ ခေါက်ဆွဲပြုတ်လေးတွေ စားကာ .. စကားကောင်းနေလိုက်တယ်လေ…။ မောင်သင်းကိုတောင်မေ့လို့ပေ့ါ…. .ပီးတော့မှ ဆေးရုံပေါ်ခပ်မြန်မြန်လေး တက်လာလိုက်ပါတယ်….
“ ဟူး…မောနေတာပဲ စိန်စိန်ရယ်……..ညီတော်မောင် မနိုးနေသေးလို့ တော်သေးတယ် ဟီးဟီး ..”
စကားချိုချိုလေးပြောကာ……… စိန်စိ်န့်အနားကို ..သွားလိုက်ပါတယ်……. ပီးတော့ စိန်စ်ိန့်လက်လေးကို မထိတထိလေး လုပ်လိုက်ပါတယ်။ နပ်စ်မလေးစိန်စ်ိန်ကတော့… ပါးပါးနပ်နပ်လေးလေ..သူ့ကို စိတ်ဝင်စားနေသောကျတော့ကို … ပြုံပြုံးလေးနဲ့ ပဲများနေလေရဲ့ ။ :-*
ကျတော်လည်း အချိန်ရတုန်းလေး …… မြင်ဘူးခဲ့သော လုံးကြီးပေါက်လှလေး စိန်စိန့်ကိုယ်လုံးလေးကို အားရပါးရကိုင်ချင်စိတ်များ ..ဝင်လာပါတော့တယ်။
ညတော်တော် ညှက့်နက်နေတော့ ….ဆေးရုံက..တိတ်ဆိတ်လို့ နေလေတယ်လေ… … အခန်းကလည်းတံခါးပိတ်လို့ရတော့..မောင်သင်းတာ အိပ်မောကျနေရင်တော့….. စခန်းသွားလို့ရပီပေါ့…
ဒါနဲ့ စိန်စိန့်မျက်နှာလေးကို စေ့စေ့ကြည့်ကာ . . “ စိန်စ်ိန်…အကို ညီမကို စိတ်ဝင်စားတယ်ကွာ ” ..အီစီကလီစလုပ်လိုက်ပါတယ်… ..တောသားဆိုတော့ ..သိပ်တော့ ..မတတ်ဘူးပေါ့… ရှက်ပြုံးလေးနဲ့ ..တုံ့ပြန်လာသောအသံလေးက … ကျတော့ကို ဆွဲဆောင်နေပြန်ရောလေ…….
တိတ်ဆိတ်ပီး..ခေါင်းငုံ့နေသော.. စိန်စိန်အား …ကျတော် ဖြေးဖြေးလေး ဖက်လိုက်ပါတယ်….။
သူမတယောက် မငြင်းပါ……။ ညိမ်ညိမ်လေးနဲ့ ……စဉ်းစားနေဟန်တူပါတယ်..။
“ အကို ညီမကို နားလည်ပေးနိုင်လို့လား.. ညီမက……….” စကားတောင်ကောင်းကောင်းပြန်ပြောချိန်မရလိုက်ပါ…
မောင်သင်းကုတင်ရဲ့ ခြေရင်း ထိုင်ခုံပေါ်မှာ ထိုင်နေရင်း……..ဖက်ထားသော ကျတော့လက်များကို ..ပိုတင်းစွာ ဖက်လိုက်ပီး ……နပ်စ်မလေး မျက်နှာအား ……….. မနားတမ်း နမ်းလိုက်ပါတယ်…… .. သနပ်ခါးနံ့လေးများ ထိုးဝင်ကာ .ရင်ထဲရောက်သွားပါတယ်…….. တချိန်ထဲ ..ညီလေးကလည်း…….. မနိုးရပဲ ထလာပါတော့တယ်…. ။
ပုဆိုးထဲ ထိုးထိုးထောင်ထောင်ပေါ့……. ကျတော်ဖက်ထားသောကြောင့် စ်ိန်စ်ိန်မှာ … လှုပ်မရဘဲ ရင်ခွင်ထဲမှာ..မိန်းမောနေပါတော့တယ်…. ကျတော့ပေါင်ပေါ်တင်ထားသော သူမရဲ့လက်များက…….ပူနွေးနေသော ညီလေးနဲ့ ထိမိနေပါတော့တယ်။ ခပ်သွက်သွက်လေးနေတတ်သော စိန်စ်ိန် ခုတော့ .. ညိမ်သက်စွာ..ရင်ခွင်ထဲပေါ့…
အခြေအနေကောင်းမှန်းသိလိုက်တဲ့ ကျတော်က… စ်ိန်စ်ိန်ရဲ့..နီရဲနေသော နှုတ်ခမ်းများကို… စတင်ထိလိုက်ပါတယ်။
အင့်……….အင့်.. အသံလေးနဲနဲ ထွက်လာပါတယ်. ပီးတော့ .. စိုးရိမ်စိတ်တွေနဲ့ စကားပြန်လာပါတယ်..
“ အကို..ဆေးရုံနော်..အကို..ဟိဟိ …….. စိတ်ထိန်းနော်… ” :)… ကျတော့ကို…နဲနဲပြန်တွန်းထားပီး.. ပြောင်ချော်ချော်လေးလုပ်နေလေရဲ့ .. အော်သူ့ကြည့်ရတာ… ခလေး လေးလိုပါလားနော်….. …
“ ညီမရယ်.. ဘယ်သူမှ.. မလာတော့ပါဘူးကွယ် အကို တံခါးကို ချက်ချထားခဲ့ပါတယ်… ဟီးဟီး..”
“ အော် တော်တော်ကဲ .. အကြံနဲ့ပေါ့လေ …”
“ ချစ်လို့ပါကွာ .. နော် ” ..ခပ်ပြုံးပြုံးလေး..ပြန်ပြောကာ..တင်းတင်းလေးဖက်ထားလိုက်ပါတယ်.. ရင်ခွင်ထဲမှာတော့…….. .. နွေးအိကာနေပါတော့တယ်..
တချက်တချက် ပါးလေးကိုနမ်းလိုက် နှုတ်ခမ်းလေးကိုမထိတထိလေး စုပ်ယူလိုက်ပေါ့…… သူနာပြုဆရာမလေးတော့.. ကျတော်ပြုသမျှနုနေပါတော့တယ် ။ ….
နံရံပေါ်မှ နာရီလက်တံကို အမှတ်တမဲ့ ကြည့်လိုက်မိပါသည် ။….
“ ည ၁ နာရီ ကျော်ကျော်တောင် ရှိနေပါရော့လား…..” အံ့အားသင့်စွာ တကိုယ်တည်း ညည်းတွားလိုက်တယ် …
“ အင်းလေ စိန်စိန်စိတ်ပါနေတုန်းလေး……ဒီနေ့တရက်ပဲ အချိန်ရှိတော့တာ…….. ကြိုးစားမှဘဲ ” :-*
ရင်ခွင်ထဲမှာ… မျက်လုံးလေးမိတ်ခါ …ကျတော့အလိုကိုလိုက်နေသော စိန်စိန့်ကိုအခါခါနမ်းရှိက်ရင်း ..… …..
စိတ်တွေထိန်းမရတော့ပါ……… ရင်ထဲမှာလဲဗလောင်ဆူနေပြန့်တယ်…….. ဒါနဲ့ပဲ… နှုတ်ခမ်းလေးကို မပြတ်နမ်းစုပ် နေရင်း လက်ချောင်းလေးများဖြင့် .. စိန်စ်ိန့်ရင်သားအစုံအား ဖွဖွလေး ဆုပ်နယ်ပေးနေလိုက်ပါသည်။ .. သူမထံမှ ညည်းတွားသံ တိုးတိုးလေးကြားနေရပါတယ်… …
နပ်စ်မအကျ င်္ီလေးက ရင်ဖုံးလေးဖြစ်နေပြန်တော့ .. အပေါ်မှ ပွတ်သပ်နေရာမှ .. ကျတော့လက်ချောင်းလေးများကို..အသာအယာ … ရင်ဖုံးလေးမှတဆင့် .. ရင်သားအစုံပေါ်ကို လျှိုဝင်လိုက်ပါတယ်… စိန်စ်ိန့် နို့လေးများက ..တောင့်တင်းကာ … လုံးဝိုင်းပြည့်ရှုံနေပါတယ် .. ဘယာဇီယာပေါ်မှပင် မို့မောက်ကာ ရှံထွက်နေပါတယ်…. ကျတော်ကတော့ .. အလွတ်မပေးတော့ပဲ နို့တလုံးချင်းကို … ဆုပ်နယ်နေလိုက်ပါတယ်…
“ အင်း အချိန်တော့ သိပ်မဆွဲမှရမယ်လေ ” ကိုယ့်ကိုကို သတိပေးမိလိုက်တယ်…..
စ်ိန်စိန်ကတော့ ဖက်ထားသောလက်များကို ပိုပီးတင်းကြပ်စွာ ကျတော့ကို ဖက်ထားတာကိုခံလိုက်ရတယ်….သူမလက်ချောင်းများကလည်း ကျတော့ရင်ဖက်ကို အသာအယာပြန်ပွတ်နေလေရဲ့
“ ညီမ အကို မီးတွေပိတ်လိုက်မယ်နော်…….. ….” တိုးညင်းစွာ စိန်စ်ိန့်နားရွက်လေးကို နမ်းရင်းပြောလိုက်ပါတယ်…
ကျတော်ခနထသွားကာ…. နံရံပေါ်မှမီးခလုတ်ကို မြန်မြန်လေး ပိတ်လိုက်ပါတယ်… အကြံကတော့ မီးပိတ်ရင်း မောင်သင်းကိုပါ အကဲခတ်ဖို့ပါ……… 😉
မီးရောင်မရှိတော့ပေမယ်… ဘေးခန်းက မီးရောင်လေးကတော့ ခပ်ဖျော့ဖျော့လေး ၇ှိနေတယ်လေ….
ထိုင်ခုံပေါ်မှာ အသာထိုင်နေသော နပ်စ်မလေးကို.. ဆွဲထူလိုက်ကာ………….. နဲနဲအရှိန်တင်ကာ နမ်းရှုံ့လိုက်တယ်..လက်တွေကလဲ အကျ င်္ီကြယ်သီးတွေကို ဖြုတ်လိုက်ပါတယ်။ ကျတော့ပုံစံက..မုန်ယိုနေသောဆင်ကြီးပမှာ… .. ပီးတော့ … မြင်ခဲ့ဖူးသော စိန်စိ်န့် ရင်သားအစုံကို အငမ်းမရ .. နမ်းလိုက် စုပ်လိုက်လုပ်ရင်း … ဘယာလေးရဲ့ ချိ်တ်တွေကို ..ဖြုတ်လိုက်ပါတယ်… တင်းရင်းဖွံထွားစွာ နို့အစုံကို တပြွတ်ပြွတ်မည်အောင် စုပ်ယူလိုက် … ဆုပ်ချေလိုက် နဲ့ ……… ကျောပြင်တလျောက်ကိုပွတ်လိုက် … ကားစွင့်နေသော .. တင်ပါးအစုံကို ………. …စုပ်နယ်လိုက်နဲ့… တော်တော်ကို သောင်းကျန်းနေလိုက်တယ် …
အခြေအနေကတော့ …… မဲမှောင်ကာ အသဲအသန် ရွာမည့်မိုးလိုပေ့ါ .. …………..
ကျတော်လည်း အဝတ်တွေကုန်အောင် အမြန်ချွတ်လိုက်ပါတယ် …….ပီးတော့ …… သံချောင်းအလား မာတောင်နေသော ညီလေးကို ..အသာအယာလေး စိန်စ်ိန့်လက်ဖဝါးထဲကို မသိမသာ ထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်… သူမကတော့ …. …ရှုက်နေသောဟန်ပန်နဲ့ တုန်ရီစွာ စုပ်ကိုင်ထားရင်း.. ….ညည်းတွားနေလေရဲ့….
ထမီ အနီလေးကို ဖြေးဖြေးလေးရှောချလိုက်ပါတယ်… အခုချိ်န်မှာတော့……… ဇာပန်းပွင့်လေးတွေနဲ့ ပန်တီပန်းရောင်လေးပဲ ကျန်ပါတော့တယ်…. ကျတော် အသာအယာ..ပန်တီလေးပေါ်မှ .. ပွတ်သပ်ကာ………. အဖုတ်လေးကို ရွရွလေး ပွတ်ပေးလိုက်တယ်…. .. စိုရွဲနေသော စ်ိန်စိန့်အဖုတ် ဖောင်းဖောင်းလေးကို ….အားရပါးရကိုကိုက်လိုက်ချင်တယ်လေ…………..
ထိုင်ခုံဘေးနားလေမှာ မတ်တပ်ရပ်လေး .. နှစ်ဦးသား… မုန်တိုင်းထန်နေလေပီလေ…. စိန်စ်ိန်ကလဲ ..လောကစည်းစိမ်ကို ငတ်ပြတ်နေသူလေ….. သိပ်ကြာကြာအချိ်န်ဆွဲမနေတော့ပဲ ..သူ့ပေါင်တံလေးတချောင်းကို နဲနဲမြောက်ကာ… ….ညီလေးကို အသာအယာလေး အဖုတ်လေးရှိရာမှန်းကာ တေ့ပီးသွင်းလိုက်ပါတယ်….မတ်တပ်ရပ်ပီးတခါတလေ လုပ်ရတာက ….. တမျိုးကောင်းနေပြန်ရော………
“အို..ကောင်းလိုက်တဲ့ အဖုတ်လေးပါလား ……… ဖောင်းပီးအိနေတာပဲ …” စိတ်ထဲကျေနပ်အားရစွာပြောနေရင်း… စီးပိုင်ကာတင်းကြပ်နေသော အဖုတ်လေးထဲကို ခပ်သွက်သွက်လေး … ကြမ်းကြမ်းလေး ဆောင့်နေလိုက်ပါတယ်။
အချိန် တော်တော်ကြာသည်အထိ ပုံစံမပြောင်းမိပါ…………. ဆွဲတာဆွဲတာ……….. ခနကြာတော့မှ…စိန်စိန့်ကိုယ်လုံးလေးကို…ဖြေးဖြေးလေးနောက်ပြန်လှည့်လိုက်တယ်… နှုတ်ကတော့ .. ဘာမှမပြောဖြစ်ပါ…
ညီတော်မောင် နိုးဘာမှာကိုလည်း စိုးရိမ်ရသေးတယ်လေ…….. အသံတွေကလည်း….တော်တော်ဆူနေပီလေ…
စိန်စိန့်ကို နောက်ပြန်လေးလှည့်လိုက်ပီး ခုံတန်းရှည်ပေါ်ကို လက်ထောင်ခိုင်းကာ… ..နောက်မှ အားပါးတရ ဖင်တုံးကြီးတွေကို စုပ်ချေလိုက် … ညီလေးကို တဆုံးထိုးထည့်လိုက်နဲ့..
အချိန်တော်တော်ကြာအောင် …ဆွဲပီး .. အားရပါးရကို…. စိန်စိန့်ကို ချစ်နေမိပါတယ်.. 😛 တအားအားညီးတွားသံနဲ့အတူ..နပ်စ်မလေးဆီမှတီးတိုးစွာ အသံများထွက်နေတယ်လေ ………. ကျတော်လည်း…နောက်ကျေမှ…လှပသော ကိုယ်လုံးလေးကိုတဝကြည့်ကာ … အားရပါးရဆောင့်ကာဆောင့်ကာ ……… စ်ိန်စိန့်အဖုတ်လေးထဲကို… သုတ်ရည်တွေ…နွေးထွေးစွာ …. ထုတ်လွတ်လိုက်ပါတယ်…. ။